ED Recovery Stories3- သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်
ED Recovery ကိုဇာတ်လမ်းများ 3
ED Recovery Stories3သည်ပိုမိုတိုတောင်းသောအကောင့်များပါ ၀ င်သောစာမျက်နှာ ၈ ခုပါ ၀ င်သည့်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ခု Update ကိုပေးခြင်းကဲ့သို့ပင်ခံစားခဲ့ရ
အားလုံးဟေး၊ ငါ update လုပ်ဖို့အတွက်ငါ drop in လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ငါ့အဘို့အဘယ်သူမျှမ PMO ၏4လအတွင်းရောကျခါနီးပွီ, ငါတကယ်အချို့စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူခဲ့ရသည်နှင့်တူငါခံစားခဲ့ရပြီအစွန်းရောက်ယုတ္တိစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည် ငါမ PMO ၏ဤကာလအတွင်းပြောင်းလဲပြီပဲဘယ်လောက်ကြည့်ဖို့။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးညဥ့်ငါလက်ျာဘက်အိပ်ပျော်နေသောမတိုင်မီ masturbate ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အတွက်အသိပေးချက်ကိုငါမညစ်ညမ်း (သိသာတဲ့) မဟုတ်သလိုစိတ်ကူးယဉ်မဆိုမျိုးကိုသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ငါ့လက်နှင့်မှာအလွန်အလင်းလေဖြတ်။ ဤမျှလောက်များစွာသောအသုံးပြုမှု masturbate သူဆုတ်ထားတာကြောင့် Anaconda အဘယ်သူအားမျှ။
ဒီစမ်းသပ်မှုရဲ့အဓိကအချက်ကငါခံစားချက်အပြင်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမှမရှိဘဲငါခက်ခဲနိုင်မနိုင်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီခရီးကိုကျွန်တော်ခဏပြန်လာတဲ့အခါကောင်းတဲ့အညွှန်းကိန်းတစ်ခုကသင့်လက်ကိုခံစားမှုနှင့်အတူတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိသည့်အစီရင်ခံစာအမြောက်အများကိုဖတ်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ, ငါဒီထွက်ကြိုးစားနေအလွန်အံ့သြသွားတယ်။ ၂ စက္ကန့်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်အရမ်းကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်၊ ငါဒီ session ကာလအတွင်းအလွန်ကြာမြင့်စွာမနေခဲ့ပါ ငါလုံးဝညစ်ညမ်းမှုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲအချို့တုံ့ပြန်မှုများအတွက်မျှော်လင့်ခဲ့သည်, wow ငါတုန့်ပြန်လွန်းခဲ့ပုံပါဘဲ
၄ လနီးပါးလောက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါခဏတာမလုပ်ခဲ့တာကြာလို့မကြာတာကြာနိုင်တယ်။ ငါဒီတစ်ခါကွန်ဒုံးနဲ့ထပ်ကြိုးစားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ရလာဒ်များမရောက်ရှိမီ, ငါနောက်ဆုံးညဥ့်ကနေအဘယ်သူမျှမ "chaser" အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့သည်ဟုပြောရန်ရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလိုစိတ်မရှိ၊ ကောင်းပြီ, ဒီနေ့ရဲ့ session ကိုလွန်ခဲ့သောနေ့ကကဲ့သို့အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကွန်ဒုံးကိုဘာပြသနာမှမရှိဘူး၊ မတိုင်ခင်နဲ့ပြီးနောက်မှာအရမ်းခက်နေတုန်းပဲ၊ ကွန်ဒုံးနဲ့ပက်သက်ပြီးပြfinishingနာမရှိဘူး။ အဆိုပါ kegel လေ့ကျင့်ခန်းကျိန်းသေလည်းလစာပေးဆောင်။ လင်းနို့ပေါ်မှချက်ခြင်းစိုက်ထူလိုက်သည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ၎င်းသည်အတိတ်ကကျွန်ုပ်မှတ်မိခဲ့သည့်အရာထက်အော်ဂဇင်အရမှတ်တွင်ချက်ချင်းရပ်ရန် ပို၍ လွယ်ကူခဲ့သည်။ ဒါကအနာဂတ်မိန်းကလေးတွေကိုပျော်ရွှင်စေသင့်တယ်
ငါအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်မှာပိုကောင်းလာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အညွှန်းတစ်ခုခုလိုချင်ခဲ့တယ်။ ဒါကိုအောင်မြင်မှုလို့ကျွန်တော်မှတ်ယူပြီး၊ မင်းရဲ့လတ်တလောမှတ်ဉာဏ်ကိုမအောင်မြင်ဘဲအောင်မြင်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုထားရှိဖို့အမြဲတမ်းပိုနှစ်သက်တယ်။ ငါသည်လည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုနောက်တဖန်မသောက်တော့ဘဲ၊ ခဏ (တစ်လဖြစ်နိုင်သည်) ကိုတဖန်ခေတ္တရပ်တန့်ရန်ကြံစည်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်လိုသောပြင်းထန်သောဆန္ဒရှိသည့်မည်သည့် chaser effect ကိုမဆိုကျွန်ုပ်သည်နောင်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ပါမည်။ ဒီလောက်ထိကြီးကျယ်တဲ့အရာတစ်ခုမရှိဘူး။
ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကသူ့ဟာသူကုသပေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါကတစ်လအတွင်းမှာရွေ့လျားနေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကအချိန်ရိုးရိုးလေးလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုလုံးကို (ငါကနောက်အကြောင်းအရာတစ်ခု) နဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ကာလတွေမရှာတော့ဘူး။ ငါဟာဆက်ဆံရေးကိုမစချင်တော့ဘူး၊ ပြည်နယ်။ ငါနေမယ့်နေရာအနီးမှာနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာ။ ဒါကြောင့်ငါနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုကိုမကြာခင်စနိုင်တော့မယ်လို့မျှော်လင့်မိတယ်။ ငါပြောချင်တာကငါ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကစိုက်ထူမှုကိုမခံနိုင်ခြင်းကနေကြာရှည်မခံနိုင်အောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ လုံလောက်သော။
ငါဟာအများအားဖြင့်ငါ့ကိုကုသပေးပြီလို့ငါပြောတယ်။ P&M မပါဘဲရက်ပေါင်း ၃၀ သွားခဲ့ရသည်။ (ယခင်ကတင်ပြချက်များကိုပြန်ကြည့်ပါ) ယခုမူ M သည်ပုံမှန်၊ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် porn ကိုမကြည့်ပါနှင့် porn သည် IMHO တွင်လူသတ်သမားဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကွန်ဒုံးများသည်သင်၏စိုက်ထုတ်မှုများကိုသတ်ပစ်ပါကသင့်တော်သောအရွယ်အစားရှိအောင်သေချာပါစေ။ သတ္တုတွင်းတွေအရမ်းတင်းကျပ်ပြီးသွေးထောက်ပံ့မှုကိုဖြတ်တောက်လိုက်လို့ပိုကြီးလာတယ်။ သူကတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ခံစားရလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။
ငါ6ပတ် P & M မဟုတ်ပါရေတွက်ပြီးတော့တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် M ကပဲလူအများစုထွက်ဒဏ်ငွေခွဲထားသင့်တယ်!
ဟေ့ကောင်တွေဒီတော့ PIED နဲ့ငါခဏတာရုန်းကန်နေရတယ်။ ငါနှင့်အတူရှိနေသောနောက်ဆုံးမိန်းကလေးကသူမကိုမှုတ်သောအခါမှသာတက်နိုင်မည်။ သို့သော်ကွန်ဒုံးကိုတင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အားကုန်သွားသည်။ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကတည်းကစပြီးအမြန်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုကြည့်ရှုနေသူအသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ။ လောလောဆယ် ၅၆ ရက် hardmode ၅၆ တွင်ယခုခရီးစဉ်၌အဝတ်အချည်းစည်းဓာတ်ပုံ၏အကြိမ်အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်အစောပိုင်းအထက်တန်းကျောင်းများကတည်းကကြုံခဲ့ဖူးသမျှတွင်အခက်ခဲဆုံးဆုကြေးငွေအချို့ကိုရရှိခဲ့ပါပြီ။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါကငါ့ကိုပြောပြနိုင်ပါသလား။ သင့်ရဲ့ပုံပြင်များနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်။ ကြားချင်မှနှစ်သက်လိမ့်မယ်
ဟုတ်တယ်၊ ငါရောဂါပျောက်ပြီးပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ပြnewနာအသစ်မှာအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂-၃ မိနစ်ခန့်ကြာပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင်ထပ်မံလိင်ဆက်ဆံလျှင်၎င်းသည်ဤသို့မသွားနိုင်၊ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုအပ်လား
LINK -130 နေ့အစီရင်ခံစာ
ငါ 120 မှာစစ်ဆေးခြင်းကိုလွဲချော်, ငါက 150 အထိကျော်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပေမယ့်ထင်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုခုမကြာသေးမီကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း - ကျွန်ုပ်အသက် ၄၀ ရှိပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏ ED ကိုကုသရန် nofap ကိုလုပ်နေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနည်းနည်းနဲ့အမြဲတမ်းအထီးကျန်နေခဲ့တယ်။ ငါမှာခဏတာ SO ရှိခဲ့ပြီးလိင်ဆက်ဆံဖို့ ED ဆေးတွေကိုအမြဲသုံးတယ်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာပြီးနောက်ငါ reboot မရနိုင်တော့ပါ။
ED ရှိနေသေးပေမယ့်ကျွန်တော့် SO ကတစ်နေ့ကျရင်ငါ့ကိုအသုံးဝင်ပါတယ် ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုလက်နဲ့ချွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီတိုးတက်မှုကိုငါခေါ်တယ်။ ငါသည်လည်းအချို့သောအလိုအလျောက်တစ်ဝက်စိုက်ထူရသေးစတင်, အဘယ်သူမျှမအပြည့်အဝစိုက်ထူသေး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမှာကညီအစ်ကိုတွေအတွက်ဆွဲထား, သငျသညျတလျှောက်ကိုသွားကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူရရှိသွားတဲ့, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်နိုးနိုးကြားကြားဖြစ်ရပါမည်!
နေ့ 10: အဆိုပါဝါရှင်တန် Monument
ရလဒ်တွေနဲ့တကယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုငါတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ ခိုင်ခံ့နေပါ၊ သာပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
mb သို့မဟုတ် p မျှနှင့်အတူယနေ့၌ခုနစ်ရက်သတ္တပတ်။ သွားကြဖို့ငါးပတ်ငါအရမ်းနင့်နေပြီ၊ ငါလူသတ်သမားရလဒ်များကိုမြင်နေပါ၏ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်တကယ်ပင်တကယ်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါလုပ်ရန်အားလုံးသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားသည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ခက်သည်။ ပို၍ ခက်ခဲလာသည်။ ဒါကြောင့်ရလဒ်တွေကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတာသိပေမယ့်အော်ဂဇင်မဖြစ်ခြင်းကစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အချိန်ပိုကုန်လာသည်နှင့်အမျှဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပို၍ ခက်ခဲလာသည်။ အပတ်တိုင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤရလဒ်ကောင်းများကိုရရှိခဲ့လျှင် ၃ လတာအပြေးပွဲပြီးဆုံးသောအခါမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ၊ သို့သော်စိတ်ပျက်စရာများသည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းများဖြစ်သည်။ ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ဘဲမနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါက mbing မဟုတ်ဘူး။ ငါဒီ post ကိုအနုတ်လက္ခဏာအခြေခံပါတယ်သိပေမယ့်ငါဘယ်မှာငါ frustrations- haha ​​post နိုင်နေရာတစ်နေရာချင်တယ်။ အားကြီးသောယောက်ျားများကိုစောင့်ရှောက်ပါ၊ ငါမင်းကိုအခြားတစ်ဖက်မှာတွေ့မယ်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါ။ ငါယောက်ျားမပါဘဲမဟုတ်ဘဲ porn အများစုမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ငွေကိုလောင်းချင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖယ်ရှားပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြိမ်နှုန်းကျသည်။ ငါလုပ်ပြီ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbating လိင် drive ကိုမှတော်တော်လေးအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းနိဂုံးထံသို့လာကြ၏။ ဒါဟာလိင်အရလိင်အရတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း၊
(အသက် ၂၀) ၁၇-၂၀ တွင်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ရှစ်သောင်းပေါင်းနိုင်သည့်အနက် ၃၀၀ သာမဲပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း။ နှစ်ခုမဲသာရှိခဲ့ရင်တောင်။ ငါနေဆဲပြီးပြည့်စုံသောထိတ်လန့်၌ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်အသက် ၁၅ နှစ်ကနေ ၃ လမတိုင်ခင်ကတည်းက ((nofap ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တုန်းက) ဒီပြproblemsနာကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့တစ်ခုတည်းသောသူဟာငါကိုယ်တိုင်ပဲလို့ထင်ခဲ့တယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခွင့်ပြုဖို့အဲ့တာကိုငါသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတစ်ယောက်ဟာမကြားဖူးဘူး။ ၅ နှစ်တာကာလအတွင်းခံစားခဲ့ရသောညစ်ညမ်းစေသောညစ်ညမ်းစေသောဆိုးကျိုးများမှကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် nofap ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ဤနေရာတွင်ဤထောက်ခံမှုအားလုံးရှိသည်ဖို့၎င်း၏လှပသောအရာ။
pre-အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းခေတ်အကြားကွာဟမှုများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့် porn ခေတ်အထိချဲ့ကာသူတစ်ဦးအဖြစ်, ငါနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ကိုးဆယ်ဖို့အစောပိုင်း၌ငါ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များတွင်လိင်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှစ်ခုလုံးအပါအဝင်မျှပြဿနာများရှိခဲ့သငျသညျပွောပွနိုငျ။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းနှင့်စတင်ခဲ့သည့်အင်တာနက်ဗွီဒီယိုညစ်ညမ်းမှုထဲသို့ကျွန်တော်စတင်ဝင်ရောက်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုတိုးတက်လာသည်။ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုသည်ကြီးမားသောပြwasနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှအော်ဂဇင်မဖြစ်တော့ဘဲတစ်ခါတစ်ရံယောနိထဲ၌အော်ဂဇင်ကိုအခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အခြားမည်သည့်လမ်းမှမထွက်ခွာနိုင်သဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပင်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် အင်တာနက်ခေတ်မတိုင်မီကကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်စိတ်ကူးယဉ်မှုများသာရှိခဲ့သည့်အခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တခါတရံလုပ်ခဲ့ဖူးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းမြန်နှုန်းမြင့်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကအရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမခံစားရဘူး၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ porn ကကျွန်တော့်ကိုနှိုးဆွပေးတယ်။ ငါတောင်မှငါ့အဘို့ထိုသို့ပြုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှိုးဆော်ခြင်းငှါ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်, ငါ့ဇနီးနှင့်အတူလိင်မတိုင်မီ porn ကြည့်ရှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ (မလွယ်ကူသောအရာ) ကိုညီမျှခြင်းကနေပယ်ဖျက်ပြီးတာနဲ့, ငါ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကြိမ်နှုန်းကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်ငါ့လိင်ဘဝတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ငါကဒါကြောင့်ငါ့အ porn သွေးဆောင် ED ကုသပေးခဲ့သည်သံသယမရှိဘဲပြောနိုင်ပါတယ်။ ငါ့မှာရက် ၉၀ လောက်ရှိတယ်၊ ၁၀၀ ကျော်တော့မင်းမကြိုက်ဘူး။ ငါညနေခင်း၌တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပြီးစိုက်ထူရန်အခက်အခဲမရှိပါ။ YBOP ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမရှာခင်ကျွန်တော်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာ ED ပြproblemsနာတွေရှိခဲ့တယ်။ ငါသည်လည်းယခု 90 နှစ်ကျော်အဘို့ဤမှာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ပထမနှစ်ကတကယ့်ကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်၊ ဒီနှစ်အထိငါ ED ကိုလုံးဝပျောက်ကင်းအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က Cialis အတွက်ဆေးညွှန်းရေးထားတာကိုကျွန်တော်မနှစ်သက်ပါဘူး။ ဆရာ ၀ န်ချိန်းဆိုတာတောင်မှ ၀ မ်းနည်းမိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နက်နက်နဲနဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းငါပြbecauseနာဖြစ်စေတဲ့ PMO ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါက yourbrainonporn.com ကိုမတွေ့ခင်ကပဲ။
ငါကသင်တို့တွင်အချို့သောမှအားပေးအားမြှောက်နိုင်ထင်သကဲ့သို့ငါ, ငါ့အခြေအနေတစ်ခု update ကိုလုပ်ချင်ပါတယ်။ ငါတတ်နိုင်သမျှဖတ်ရှုဖို့အဖြစ်တိုတိုနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ငါဒီသတင်းကိုဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ် - ပထမဆုံးအကြိမ်တင်သည့်နေ့စွဲ - အဲဒီနေ့မှာငါဟာညစ်ညမ်းမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိဘဲအနည်းဆုံး ၂ လကြာအောင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ငါသည်လည်းပြု၏။ အတိဖြစ်ဖို့3နှစ်ခွဲ။
ဤကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏ libido အလွန်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်မရှိသလောက်ဖြစ်သော်လည်း ၃ ပတ်တစ်ကြိမ်တိုင်းမကြုံစဖူးသောအဆင့်များသို့တက်သွားနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ချိုချိုသာသာခံစားရလိမ့်မည် (ရေချိုးခြင်းအတွက်အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ခက်ခဲသွားလိမ့်မည်) ။ ဒီဟာက ၃-၄ ရက်ကြာပြီးနောက် libido သုညသို့ပြန်သွားလိမ့်မယ်။ ငါဒီမှာဝမ်းနည်းဖြစ်ခြင်းသတိရပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်သည်အချိန်ကာလ၏ ၉၀% ကဲ့သို့ကျဆင်းလျှင်၎င်းသည်အဘယ်နည်း။
ဤအချိန်ကာလပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည် (ပြည်ပတွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်)၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသို့ပြန်လာရန်ဖြစ်သည်။ နှင့်အတူပြန်လာအခြားအရာ - ငါ့လူ - ပါးပျဉ်းစမ်းသပ်ခံရကြောင်းခံစားချက်, စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်သူမတွေ့ဆုံမီသတ်သေအတွေးများ, etc
ပြောင်းလဲမှု၏ပထမဦးဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာလိင်စိတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တိုင်း3ရက်သတ္တပတ်မြင့်မားအပေါ်ဖြစ်ခြင်းကနေ, ကအပတ်တိုင်းမြင့်မားအပေါ်ဖြစ်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်Aprilပြီလ ၂ ရက်၊ ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်က၊ အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်မျှော်လင့်ချက်များဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ညနေခင်းသံသယများနှင့်မကောင်းသောအတွေးများကိုသူမနှင့်အတူရှိနေစဉ်အတွင်း) ငါနှင့်ငါ့ရည်းစားသည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ငါထိုးဖောက်ဆိုလို အိပ်ရာပေါ်မှာလှည့်ပတ်အရူးပြီးနောက်ငါ့လိင်တံတစ်ဝက်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ သူမထပ်မံထည့်နိုင်သေးပေမယ့်သူမလုပ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းရွေ့လာတာမယုံနိုင်စရာပဲ။ ၁၅ စက္ကန့်အတွင်းမှာငါသုတ်ရည်ထွက်လာတယ်။ မစမ်းသေးသောသင်တို့အားလုံးအားငါဆိုသည်ကားယောနိ၏လေဖြတ်ခြင်းသည်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်နိုင်ပြီးအလွန်ကောင်းသည်ဟုငါဆိုသည်။ ဒါဟာလိင်တံသုတ်ရည်ဖြစ်စေရန်တည်ဆောက်ခဲ့သည်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ထိုနောက်မှအကြှနျုပျ၏လိင်စိတ်ကြာရှည်စွာအဘို့အမြင့်မားဆက်ပြောသည်။ ဒါဟာအားလုံးပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပြူးလာပြီးခဲ့ပါတယ်နှင့်သောကြာနေ့ငါသည်ငါ့ရည်းစားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, တဖန်ကျွန်တော်အလွန်ကျေနပ်လိင်ရှိသည်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ နှစ်ကြိမ်ထိုးဖောက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဒုတိယအကြိမ် Ejaculated ။ အောက်ပါနံနက်, ငါသည်အစဉ်အမြဲငါဖူးအကြီးမားဆုံးတောအုပ်ထဲကတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်ခံ့သောလိင်စိတ်နှင့်အလွန်အားကောင်းတဲ့တောအုပ်တနင်္ဂနွေတစ်လျှောက်လုံးနှင့်ယနေ့ကာလအတွင်းဆက်လက်ပါပြီ။
အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းနှင့်မျှမတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ 1) တစ်ဦးက2လကာလပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ဒါဟာအချိန်များတွင်အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပေမယ့်ငါထိုသို့ပြုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွမ်းကျင်နိုင်။ ငါသည်ငါ၏စိတ်ကိုပျောက်အတှေးအနေကကူညီပေးခဲ့သောအချိန်တွင်အခြားအရာနှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂) ဤကာလအတွင်း libido သည်ပြင်းထန်သောတန်ဖိုးများကိုပြသသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပြီး၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ရုတ်တရက် P & M လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
၃) ၂ လကြာပြီးနောက်လိင်စိတ်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာသည်၊ ၎င်းသည်အတော်အတန်မြင့်မားသည်၊ သို့မဟုတ်များသောအားဖြင့်အတော်အတန်မြင့်မားသည်။ ငါသတိထားမိသည်မှာကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုမှာညစ်ညမ်းမှုမရှိသောမူဝါဒကြောင့်လမ်းပေါ်ရှိမိန်းကလေးများစွာသည်ကျွန်ုပ်ကိုဆွဲဆောင်ပြီးသူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်ဖြစ်လာသည်။ ဒါကကျွန်မ porn ကိုကြည့်တဲ့အချိန်လောက်မှာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ပြီးတော့“ သာမန်” မိန်းကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်ခံဖို့နဲ့ပျော်မွေ့ဖို့ပိုပြီးအဆင်သင့်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။
၄) ၂ လကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မဟာညစ်ညမ်းရုပ်ကိုတစ်ကြိမ်သာကျင့်သုံးခဲ့ပြီးယခုအခါမှာမရှိဘဲကြာကြာနေဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ခန့်အကြမ်းအားဖြင့်ပြုလုပ်နေသည်။ ငါဒီဟာအန္တရာယ်မကင်းဘူးလို့ထင်တယ်၊ စက်ကိုဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်စေမယ်ဆိုရင်တောင်အကျိုးရှိနိုင်တယ်။ ငါပိုရှည်သံသရာသွားနိုင်ပေမယ့်,4သို့မဟုတ်2ပတ်တိုင်းပြောပါ။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါလိင်တံကိုမခံစားမိစေရန်အလွန်ပေါ့ပါးသောဆုပ်ကိုင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
၅) အထောက်အကူပြုသောရည်းစားထားရှိခြင်းသည်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ အောင်မြင်မှုရရန်၎င်းသည်စိုးရိမ်ခြင်းလက္ခဏာများရှိပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖြစ်သကဲ့သို့အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သူမသည်သူမရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်အနားတွင်ရပ်။ ကျွန်ုပ်အပေါ်မည်သည့်ဖိအားမျှမပေးခဲ့ပါ။ ထို့အပြင်သူမတစ် ဦး တည်းနေထိုင်သည် (သူမ၏မိဘများသည်များသောအားဖြင့်အဝေးတွင်) ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူမသည်သူမ၏နေရာကိုအခြားညများ၌လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်အခက်အခဲမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ယောက်ျားတွေ၊ ငါတောအုပ်ထဲကနေလွတ်သွားပြီလို့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းကောင်းတယ်။ ဤနည်းသည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုရခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကို ၂ လကြာရပ်တန့်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ (ကြိမ်နှုန်းကလူပေါ်မူတည်သည်။ သင်၏လိင်စိတ်အမြင့်ဆုံးကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ) နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင် porn မှဝေးဝေးနေပါ။ ထာဝရ။ အဲဒါလုပ်သမျှအားလုံးကအန္တရာယ်ပဲ။
ငါ ၇၀ ရက်မှာပေါ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးရိုးသားသားပြန်ကြည့်ရင်၊ ငါဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစလုပ်တဲ့အခါငါထပ်မံ“ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု” ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဝန်ခံရမယ်။ ငါအရမ်းဒေါသထွက်နေတဲ့ libido ကိုပြန်ချင်တယ်။ ငါအရေးယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ချင်တယ်။
ငါ့ကိုမွေးကင်းစကလေးများစိတျအပိုငျးကယ့်ကိုအဆက်မပြတ်ငါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းကိုကူးယဉျနှင့်လာပြီခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူသောဒီတော့ငါကြိုက်တယ် porn ၏အထူးကြင်နာနေဖြင့်ဖွင့်ခြင်း, edging, edging, edging နှင့်ခံစားမှုကြောင့်လည်းမရှိသောကွောငျ့, ငါကအကြောင်းအနည်းငယ်ညှိုးငယ်ခံစားရတယ် ငါဒါ horny ကြောင့်ငါအရည်ပျော်ခဲ့ပါတယ်လိုပဲ။
ယခုငါကြည့်ရှု - အားလုံး infantile ဖြစ်ခဲ့သည်။ လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုဂရုမစိုက်ပဲမွေးကင်းစကလေးငယ်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်၊ စိတ်ကူးယဉ်မှုများအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးသင်နှင့်အတူရှိသူကိုသင်မချစ်ပါကသူတို့၏မျက်လုံးများမှရွှံ့စေးများကိုချက်ချင်းသတိပြုမိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နှစ်သန်းပေါင်းများစွာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အားဖြင့်အရာအားလုံးဖြန့်ကျက်သွားသောကောင်းကင်တမန်ဖုန်မှုန့်သည်… .POOF … ပြီးတော့မင်းကအမြဲတမ်းလှပပြီးကျေနပ်စရာမကောင်းတဲ့တကယ့်ဘဝကိုကြည့်နေတယ်။
နင်ငယ်ရွယ်သောမင်းသားငယ်များအတွက်“ ကောင်းကင်ဖုန်မှုန့်” သည်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်သည်။ ငါကနှိုးဆော်မှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုအဖြစ်ယူမှတ်ခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာအဖြစ်မှန်ကိုပျက်ပြားစေလို့ပဲ။ ငါတို့သည် rebooters အားလုံးစွဲတယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုလေ့ကျင့်။ ပြီးတော့အခြေခံကျတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလုပ်ဆောင်ချက်တွေအရှိန်မြင့်လာတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီမှာဒီ site မှာစကားပြောနေကြတာပဲ။
ဒါပေမယ့်အဓိကအချက်ကငါ့ဘ ၀ မှာညနေခင်းကိုထွက်ခွာသွားသလိုခံစားရတယ်၊ ငါ့ရဲ့လိင်သဘာဝနဲ့ငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကပိုကောင်းလာတယ်။ “ ဟေ့၊ လိင်ဟာငါ့ရဲ့စရိုက်တစ်ခုလုံးကိုမျိုမပစ်ဘူး။ ဒါဟာဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲ။ ”
သို့သော်မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ သင်ကဲ့သို့ငါ pansy ရင်တောင်စက်ယန္တရားပြန်လာတယ် ဒီနေ့တခါတရံငါတစ်နေရာရာသို့ရောက်သောအခါတစ်မိနစ် (သို့) နှစ်နာရီခန့်ကားထဲတွင်နေရမည်။ အကြောင်းမှာငါလုပ်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။ ဒီလိုမျိုးအချိန်ကြာမြင့်စွာမဖြစ်ခဲ့ပါ။ အခြားအရာတွေလည်းအခုဖြစ်ပျက်လာပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအကုန်လုံးကိုမရေးတော့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကမ္ဘာမှာအရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူး။
အဲဒီမှာ Hang နှင့်သင်ရလိမ့်မယ် အဲဒါကိုနိုးနိုးကြားကြားရှိပါ။ မင်းဟာမင်းရဲ့ဟန်ချက်ညီညီအသစ်ကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဟာပိုမိုအားကောင်းလာမယ်၊ သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့အတူသက်တောင့်သက်သာရှိလိမ့်မယ်၊ သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းပိုကောင်းလိမ့်မယ်၊
[Added] ငါစုစုပေါင်း abstinence ၏ရှည်လျားသောကာလကိုသွားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သောအမြင်ဖြစ်၏။ ငါမျိုးအမှတ်မထင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း reboot အရာကိုပြု၏။ ငါထို့နောက်မပါဘဲတစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုသွားပါ, ရက်အနည်းငယ် PMO သို့မဟုတ် MO ကိုပြုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ကျောနှင့်ထွက်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အဘို့။ မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမတိုးတက်မှုမြင်တော်မူ၏။ ငါကတကယ်အတော်လေးနည်းနည်းပိုဆိုးတယ်ထင်ပါတယ်။
ငါ PMO လုံးဝရပ်တန့်ခြင်းနှင့် flatline ကာလရှောက်သွားသည်အထိအမှုအရာသည်အနာပျောက်စေသောခဲ့ကြသည်တူသောငါခံစားခဲ့ရဘူး။ တစ်လလောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကျွန်တော်သတိပြုမိလာတယ်။ အခုဆိုရင်ကျွန်မဟာ ၂ လကြာတိုးတက်ခဲ့ပြီးပိုတိုးတက်လာပါပြီ။
(နေ့ 44) နေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါ့နံနက်ခင်းစိုက်ခင်းများသည်ပိုမိုနူးညံ့ခိုင်မာလာသည်။ ငါနိုးလာတဲ့အခါအခြေခံအားဖြင့် horniness နဲ့မူးနေတယ်။ ဒါကငါ့အတွက်လုံးဝအသစ်သောခံစားမှုဖြစ်သည်။ ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမခံစားဖူးဘူး ငါ့လက်တွေနိုးလာတဲ့အခါမှာအခြေခံအားဖြင့် autopilot ဖြစ်ပေမယ့်ငါဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ရှားတယ်။ နေ့ ၄၀ မှာငါ့ဘ ၀ မှာရှိခဲ့ဖူးသမျှကိုငါမှတ်မိနိုင်သမျှအပြင်းထန်ဆုံးစိုက်ထူခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာဘုန်းကြီး !!! ကံမကောင်းစွာပဲ, ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ငါ့အတွန်းအားကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ပြီးငါအော်ဂဇင် (သွားတယ်။ ကျန်တစ်နေ့တာနဲ့ကျွန်မရဲ့ဟော်မုန်းတွေကကျွန်မရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေတာကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါ ၄၁ ရက်နီးပါးစိတ်ဓာတ်ကျနေပြီးစိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်။ ဒါကဒီစိန်ခေါ်မှုကိုစကတည်းကငါမရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါ PMOing ဖြစ်တုန်းကကျွန်မဘဝကိုပြန်ပြောင်းကြည့်မိတဲ့အခါ ဒီနေ့ ၄၂ ရက်နေ့မှာကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်တွေတိုးလာလာတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီး ၄၄ ရက်ပဲလေ။ ငါဒီနေ့စိုက်ထူခြင်းနဲ့ပြန်နိုးထလာပြီးကျယ်လောင်စွာရယ်မောခြင်းကိုမကူညီနိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါအရမ်းမကောင်းဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ ဘဝဟာဒီလောက်မလွယ်ကူဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကတကယ်ပဲ၊ အဖြေတစ်ခုလုံးကငါ့ရှေ့မှာတည့်တည့်ရှိတယ်။ DOH =)
[အသေးစိတ်] ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာအလင်းကိုကျွန်တော်စပြီးမြင်နေရပေမယ့်ငါဟာပြားနေတဲ့ကာလမှာရှိနေဆဲလို့ထင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% သောလိင်မှုကိစ္စကိုမသုံးရန်ကတိပြုခဲ့သည် ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဟာအခုလက်ရှိဖြတ်တောက်မှုရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုမြင်တွေ့ရပြီးပြီ။ ငါစိုက်ထူနှင့်အတူနိုးသောအခါ, ငါအချို့သောလွှတ်ပေးရန်ရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိခိုင်ခံ့တဲ့စိုက်ထူမှုရှိခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်မမှတ်မိနိုင်ဘူး၊ ပြီးတော့အဲဒါကိုဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ဒီလမ်းကြောင်းကိုငါဆက်လက်လျှောက်လှမ်းလာတာနဲ့အမျှသူတို့ကိုငါဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာသင်ယူလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ၁၅ နှစ်မှစ၍ porn ကိုကြည့်ခဲ့ဖူးသည်။ ငါ၏အစိုက်ထူမှုများသည်အထက်တန်းကျောင်းများထက်ယခုပိုမိုအားကောင်းလာသည်ကိုရူးသည်။ သို့သော်ငါကြီးပြင်းလာစဉ် porn သည်ငါ၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒတွင်နံပါတ်တစ်လုပ်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပြားနေဆဲဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာမှသိသောအရာများဖြစ်သည်။ ငါအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါငါသိလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံအတွက်ကြမ်းတမ်းသောအရာသည် ငါမတိုင်ခင်ရက် ၃၀ လောက်ထိစိုက်ထူခဲ့တယ်လို့မထင်ဘူး၊ ပြီးတော့မနက်ခင်းမှာပဲ။ ပထမ ၂ ပတ်မှ ၂ ပတ်ကြာသည်အထိလျော့နည်းသွားသော်လည်းကျွန်တော်အာရုံမစိုက်ခဲ့ပါ။ သငျသညျမှတ်မိလျှင်, ငါဒီကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမတိုင်မီစုံတွဲတစ်တွဲအကြိမ်စုံတွဲနှင့်အတူရုန်းကန်, ဒါကြောင့်တူညီသောခဲ့ကြသည်ကန ဦး အဆင့်ဆင့်ကိုသတိရခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှငါစိုက်ထူမှုပြန်ရလာတော့ကျပန်းအချိန်တွေမှာပဲ၊ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ထိုအခါငါ့လိင်တံနောက်တဖန်ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့် girth ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါစိုက်ထူပိုမိုအားကောင်းနှင့်ပိုပြီးသွေးပြန်ကြောရတယ်။ နေ့ ၄၀ ငါနိုးလာပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်အားဓားဖြင့်ထိုးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုမျှလောက်ပင်ငါ့အဖြစ်မှန်ငါ့အယူအဆအတွက်ယခုတိုင်အောင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
နေ့ ၄၀ မှစပြီးကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်သည်တကယ့်ကိုမြန်ဆန်စွာပြန်လာပြီးကျွန်ုပ်၏ကတိကဝတ်ကိုနှစ်ဆတိုးခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုရက်အနည်းငယ်အထိမထိခြင်း၊ ကာလ။ ငါလေ့ကျင့်ခန်းကတကယ်တော့ဒီကိစ်စတှငျကူညီပေးနေသည်ထင်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည့်တူညီသောစွမ်းအားသို့မပြန်ခဲ့ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်စောင့်နေပါသည်။ ငါလည်းဒီရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လုံးရေကန်ဘေးမှာသောက်နေတယ်၊ ငါသောက်သူသိပ်မများဘူး ငါလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းအရက်သောက်ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ထို့နောက်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ငါစစ်ဆေးပါ့မယ် စွမ်းအင်စောင်ရေ နှင့် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလမ်းညွှန်ချက်များ အပြင်ထွက်ပေမယ့်ငါဖြစ်ကောင်းအနည်းငယ်ကြာကြာလက် - ချွတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါစလုပ်တုန်းကငါရက် ၃၀ ထိတောင်လမ်းမရောက်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချစ်ဖို့လိုပြီးလိုအပ်သလိုအချိန်ပေးချင်တယ်။ လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ၎င်းကိုကျွန်ုပ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
[မတ်လ] ငါ 12-13 နှစ်ပေါင်းန်းကျင်အဟောင်းတုန်းက masturbating Started ။ ကျွန်မရဲ့မိသားစုတစ်ချိန်တည်းမှာတက်ဖဲ့နဲ့ကျွန်မဖြစ်ကောင်းအဖြစ်မှန်မှလွတ်မြောက်ရန်တစ်လမ်းအဖြစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်မအမြဲတမ်းမင်းသမီးနှင့်အတူအတော်လေးရှက်ခဲ့ပေမယ့်ပုံကအတော်လေးရေပန်းစားခဲ့ကြပြီ။ တစ်နည်းနည်းနဲ့ငါသည်ဤစွဲလမ်းအစစ်အမှန်ရငျးနှီးငါ၏ကွောကျရှံ့ခွငျးမှ link တစ်ခုရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။
သူမကကျွန်မ porn စုဆောင်းခြင်းရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည့်အခါအကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံးရည်းစားကယ့်ကိုစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်နှင့်ဤပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်, ဒါပေမယ့်သူမဖုန်းကို-လိင်များအတွက်ဥပဒေကြမ်းကိုတွေ့သည့်အခါထို့နောက်သူမတကယ်စိတ်ဆိုးရတယ်။ ဆက်ဆံရေး5နှစ်ကြာအဆုံးသတ်နှင့်ငါ့စွဲတကယ်ကဒီပြီးနောက်ပိုဆိုးလာတယျ။ ယခုတွင်ငါသည် 31 အသက်အနှစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါပညာရေးနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြုံနေရ။ တစ်ကယ့်ကိုကောင်းတဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူအိပ်ရာအတွက်အခြားကျရှုံးပြီးနောက်2ရက်သတ္တပတ်အကြာအအေးကြက်ဆင်တော့ဘူး။
နာမငြိမ်-ခြေထောက်, မကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်း, အမျက်ဒေါသ, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အထီးကျန်: ငါသည်လည်းဒါငါနှစ်ဆလက္ခဏာတွေရုပ်သိမ်းပေးရန်ကြုံနေရငါရက်သတ္တပတ်အကြာနီကိုတင်း2သုံးပြီးတော့ဘူး။ အပြုသဘောဘက်တွင်ငါဖြစ်၏: ပိုအစောပိုင်းကအိပ်ရာဖို့, ပိုမိုအာရုံစိုက်နှင့်ပိုပြီးစွမ်းအင်သင်တန်းပေး။ ကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေကိုခေါင်မိုးမှတစ်ဆင့်နှင့်ကြမ်းပြင်မှတဆင့်နှိမ့်ချနှစ်ဦးစလုံးများမှာတူသောဒါဟာပုံရသည်။
[မေလ] ဤသည်ကို restart မှာကြှနျတေျာ့ဒုတိယအစစ်အမှန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်, ငါ4ရက်သတ္တပတ်န်းကျင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြာခဲ့သည်။ ငါ၏အ reboot စဉ်အတွင်းကျနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဦးစလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းစောင့်ရှောက်မှုခံယူလေ၏။ ဒါဟာရီစရာအသံပေမယ့်တစ်နေရာရာမှာငါနောက်တဖန်ငါ၏အမိမိကိုယ်မိမိလေးစားမှစတင်ခဲ့ကြောင်းအချိန်ကာလအတွင်းပေလိမ့်မည်။ ပြည်သူ့သတိပြုမိခြင်းနှင့်ကိုယ့်သူငယ်ချင်းမိသားစုနှင့်မိန်းကလေးများအနေဖြင့်အတော်လေးကောင်းသောတုံ့ပြန်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည်ဤအချိန်ငါကို restart ကာလအတွင်းလုံးဝအရက်ဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ I`m ယစ်မူးသည့်အခါမိုက်မဲရွေးချယ်မှုအောင်နေဖြင့်ဤအချိန်ဆိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုယူပြီးမဟုတ်ပါဘူး။
[ဇူလိုင်လ၏နိဂုံး] ငါ PMO အခမဲ့ဇူလိုင်လ၏ပထမ ဦး ဆုံးကတည်းကအခမဲ့ဖြစ်သည်, yeah တစ်လနီးပါး။ ဒါကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာရယ်စရာကောင်းပေမယ့်မိန်းကလေးတွေနဲ့ပိုပြီးစွဲဆောင်မှုရှိခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ကငါချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ED ပြproblemsနာကနည်းနည်းလေးပဲ ပျောက် ထိုသို့ SO သဘာဝကျကျဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကာလ၏စုံတွဲတစ်တွဲနောက်ပိုင်းကမ်းခြေမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်အတူတူနေတဲ့ရေကူးယူခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အကြောင်းကို5မိနစ်နမ်းပြီးနောက်ငါလူစည်ကားကမ်းခြေပေါ်တက်လမ်းလျှောက်နိုင်မှီ, ရေအေးအတွက်တစ်ဦးတည်းနေထိုင်ခဲ့ရသည်။ သူမသည်ကြှနျုပျစိုက်ထူဆုံးရှုံးဖို့ကြိုးစားနေ၏အပြည့်အဝကိုသတိထားမိသည့်မြင်ကွင်းရယ်မောခံစားခဲ့သည်။ 😉
ဤ reboot သည်ပထမတစ်ခုထက်များစွာပိုမိုလွယ်ကူပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် (၄) ပတ် PMO အခမဲ့စံချိန်နှင့်နီးလာပြီ O- အခမဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်၏ဝှေးစေ့များတွင်ထူးဆန်းသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုမှာပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်ကောလိပ်များမှပြောကြားသည်မှာကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပျက်ဖွယ်အဆင့်နိမ့်သည်ဟုထင်ရကြောင်း (သူမကဤဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သူမသိသည်) ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဤဘက်ကိုလည်းနှစ်သက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီ PMO အရာကငါ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကျပြီး pussycat ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သလား။ ဒီနှစ်ကျရင်ကျွန်မရဲ့မဟာဘွဲ့ကိုပြီးအောင်ကျောင်းကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ 🙂
ကနှင့်အတူကပ်! ရေရှည်ပြင်းထန် ED, ဒါပေမယ့်ငါ (self.NoFap) နောက်ဆုံးညဥ့်အောငျမွငျခဲ့
LINK: xstarxstar 18 ရက်ပေါင်းအားဖြင့်တင်သွင်း
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ အရွယ်ရှိပြီး၊ လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်က ED (ပြင်းထန်သော ED ဆေးများကိုသာဆိုလိုသည်။ မကြာခဏထိရောက်မှုမရှိဟုဆိုလိုသည်) သည် ၁၀ နှစ်ခန့် ED ရှိခဲ့ဖူးသည်။
မူလကငါလိင်ဆက်ဆံမှုအားထုတ်မှုနှင့် O မပါ ၀ င်ပါကရက် ၃၀ သွားမည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ED ကိုဖယ်ရှားရန်ကြာမြင့်စွာ PMO မပါရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ SO ကိုအော်ဂဇင်ပေးရန်သွားသည့်အရာတစ်ခုမှာပြီးခဲ့သည့်ညကဖြစ်သည်။ ငါ PMO မစတင်ကတည်းကသူမရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး ... သူမဟာအရမ်းထောက်ခံတယ်၊ ငါကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့သူမလိုအပ်ချက်ကိုအခုအချိန်ထိခံစားနေရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်၊
မျှဝေခြင်းမှအချို့သည်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးလျှင်သင်ဤစာပိုဒ်ကိုကျော်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လက်နှင့်သူမ၏လက်များကိုသူမနှင့်အစားထိုးလိုခြင်းမရှိသောကြောင့်သူမကိုကျွန်ုပ်ခွင့်မပြုပါ။ ငါလုံလုံလောက်လောက်စိုက်ထူခဲ့မယ်ဆိုရင်သူမကိုဆန့်ကျင်နှိပ်စက်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင် PIV ။ ငါကစားခြင်းတစ်လျှောက်လုံးစိုက်ထူ 80-100-80% ကနေကွဲပြားနှင့် 90% ကာလအနည်းငယ်နှင့်အတူ PIV အချိန်အများစုကိုအကြောင်းကို 100-XNUMX% ဖြစ်ခဲ့သည် ... ။
အဓိကအချက် - ငါအဲဒီလိုလုပ်နိုင်တာအနည်းဆုံး ၇ နှစ်ရှိပြီ။ ထိုသို့မယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ အိုအိုသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံး (မူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်ကူညီသော) PIV အော်ဂဇင်ထက်များစွာသာလွန်ပြီးကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံး PMO ထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ အကြှနျုပျ၏လှုပ်ရှားမှုများနှေးကွေးခဲ့ကြသည်။ ငါပိုပြီးအထိခိုက်မခံဖြစ်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးပိုကောင်းသလိုခံစားရတယ်။ ငါဘယ်အချိန်မဆိုပျော့ပျောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိနေပေမယ့်လည်းငါဟာ“ ယခုအချိန်တွင်” နေပြီးသူမကိုအာရုံစိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။
၁၇ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအပြောင်းအလဲများကြောင့်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်။ ငါကအပြောင်းအလဲတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်လာနေပုံရတယ်။ မင်းမှာသံသယတွေရှိရင်၊ မင်းရဲ့ပန်းတိုင်တွေအကြောင်းစဉ်းစားပါ။ အဲဒါတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိထားပါ။ အစီအစဉ်ကိုဆက်လုပ်ပါ။ ဆင်ခြေမပေးပါနဲ့။ သင်လိုချင်တာကိုရယူလိုက်ပါ၊ အားနည်းချက်။
ED ကိုငါ့ဘဝကနေရုန်းထွက်ဖို့လမ်းရှည်ရဲ့အစမှာရောက်နေတယ်။ တိုးတက်မှုကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်၊ အဘယ်သူမျှမ P ကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကြာရှည်ဘို့ fap အဘယ်သူမျှမ ... ။ ထိုနောက်မှအနည်းငယ်သာ fap ။
အခြားသူတစ် ဦး ကတင်ပြသည့်အတိုင်းနောက်လူတစ်ယောက်ကိုမျက်နှာသာပေးပြီး YBOP နှင့်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်၏ဆရာဝန်အားပြောပါ။ ငါဆရာဝန်များစွာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောရုံးခန်းလည်ပတ်မှုများ၊ ပညာရေးကမင်းနဲ့စနိုင်ပါတယ်။
TLDR - ၇ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအောင်မြင်သော PIV ကို ၁၇ နှစ်ကြာပြီးနောက်။ သင်၏အစီအစဉ်နှင့်အတူကပ်ပါ ... ဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်
ဒါဟာအပြည့်အဝအာဏာကိုပြန်သွားဖို့အကြောင်းကို3ရက်သတ္တပတ်ငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ စိတ်သက်သာမှုပါတကား။ တကယ်တော့ငါအရင်ကထက်ယခုအများကြီးပိုကောင်းတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါကြာရှည်ခံသည်နှင့် foreplay နှင့်အခြားအရာအများကြီးပိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းဒီအသက်အရွယ်နှင့်အတူကြွလာ။ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ? ငါကံကောင်းတယ်လို့ငါထင်တယ် သို့သော်၊ ငါကဲ့သို့သောသူတို့၏အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိအသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်ရှိလူငယ်များသည်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများနှင့် ၁၃ နှစ်ကဲ့သို့သောမိုက်မဲငယ်ရွယ်သောအရွယ်မှ စ၍ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ခြားနားမှုရှိမရှိသိလိုသည်။
ဒီလူငယ်ကိုစတင်ပြီး ၁၀ နှစ်လောက်ကြာအောင်အဆက်မပြတ်အသုံးပြုနေတဲ့ယောက်ျားတွေဟာတကယ့်အရာနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလားဆိုတာငါသိချင်နေတယ်။ သူတို့ပြုပြင်လို့ရလား အခြားဆိုဒ်များမှကျွန်ုပ်ဖတ်ထားသောမှတ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ 'no' ဖြစ်သည်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ယခုတွင်ငါသည်ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအကြောင်းကို2လကြာအခမဲ့ pm တွင်ပါပြီ။ အခြားနေ့က, f, ငါ့ g / စောနှင့်သူမ၏နဲ့ငါ့စိုက်ထူတပြင်လုံးကိုအချိန်အထိစောင့်ရှောက်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်နှင့်အမျှကောင်းစွာငါ့အစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ကျော်ဆည်းပူးခဲ့သည်! ငါကွန်ဒုံးမပါဘဲပေမယ့်အောင်မြင်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်ဖို့စီမံခန့်ခွဲဒါပေမဲ့ဒီဤမျှလောက်များစွာသောအတိတ်ကျရှုံးပြီးနောက်အောင်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်တဖန် porn ကိုကြည့်ဘယ်တော့မှမ။ တခြားလူတိုင်းကံကောင်းပါစေ!
ဒီတစ်ခုမတိုင်ခင်ငါ့အရင်အစအနကငါ့ရဲ့အရှည်ဆုံး ၁၉ ရက်ပဲ။ ငါပြန်ဆုတ်မိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုပြုလုပ်နေသည်ဟုခံစားရသည်။ ဒီလက်ရှိ Streak ၏ ၇ ရက်မြောက်နေ့၊ လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကကျွန်ုပ်သည်ဤမိန်းကလေးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အောက်ပါအတိုင်း NSFW ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့်ဖော်ပြရန်အလွန်ခက်လိမ့်မည်။ (LINK)
ဒီလိုမလုပ်ခင်နှစ်နဲ့ချီကြာအောင်မုန်းတီးတာကလိင်ဆက်ဆံမှုမှာအထူးသဖြင့်ကွန်ဒုံးသုံးပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲစေသည်။ ဒါပေမယ့်ငါဒီမိန်းကလေးနဲ့အတူနေခဲ့တုန်းကငါလိုချင်သမျှကာလပတ်လုံးစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့ရာထူး ၄ ခုကိုပြောင်းလိုက်ပြီးငါဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့အနေအထားကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အချိန်ယူပြီးတောင်မှငါဟာခက်ခက်ခဲခဲနေနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်ကွန်ဒုံးနဲ့တောင်မှသူမရဲ့အတွင်းအပြင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့သူမရဲ့အော်ဂဇင်ကို ၄ နေရာမှာ ၄ ကြိမ်ခွဲထားခဲ့တယ်၊ အများအားဖြင့်ကျွန်တော့်ရဲ့ထိုးဖောက်မှုနဲ့တောင့်တင်းမှုပါဘဲ။ အံ့သြစရာကကျွန်ုပ်သည်အချိန်မတန်မီမလာခဲ့ပါ။ ငါသူမအနားမှာရှိနေပြီးသူမနှစ်သက်ရာကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ခဲ့တယ်၊ သူမအိုမှာစုံတွဲတစ်တွဲရှိပြီးပြီလို့ခံစားရတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလာခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပင်လျှင်ထိခိုက်လွယ်မှုသည်အံ့သြစရာကောင်းပြီးမြန်ဆန်စွာမလာရန်သတိကြီးစွာကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တစ်ဦးချိုးယူပြီးနောက်ကိုယ့်သူမ၏ပေါ့ပေါ့အဲဒီမှာငါ့ကိုထိနဲ့နမ်းခြင်းနှင့် cuddling ကနေအလွန်လျှင်မြန်စွာအခြားစိုက်ထူရနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မကြာမီဤကဲ့သို့သောတစ်ခုအော်ဂဇင်ရှည်သောကာလ၌ငါ့အဘို့ဖြစ်ပျက်မရှိသေးပေပြီးနောက် up ပြုလုပ်ရယူခြင်း။ ကျနော်တို့ကိုတဖန်ပေါ်ကွန်ဒုံးနှင့်အတူအခြားပတ်ပတ်လည်ကိုသွားနိုင်ခဲ့ကြတယ်ကြောင့်ရှိသမျှတို့ကိုငါငါ့ကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးခံစားခဲ့ရကြောင်းအဘယ်သူမျှမ ED ကိစ္စရပ်များနှင့်ငါ့အဘို့စိတ်ကို-မှုတ်အော်ဂဇင်နှင့်အတူနည်းတူအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူမအပေါ်ထားရှိသောကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်သူမနှင့်ဆက်သွယ်မှုသည်သူမ၏အလှအပ၏အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုကိုသာမကဘဲသူမအပေါ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဒါဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးအချစ်မရှိတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပါ။ ကျွန်မသူမနဲ့အတူရှိနေခြင်းရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးဝလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်။ ငါသူမနှင့်နက်ရှိုင်းစွာဆက်သွယ်မှုလုပ်နေခဲ့သည်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချွတ်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ပါဘူး
ဒီအတှေ့အကွုံမြားငါ့ကိုအားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အနာရောဂါငြိမ်းစရာဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်နေသည်နှင့်တူခံစားတယ်သိရသည်။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်မည်, ငါ 34 yrs အဟောင်းဖြစ်ကြောင်းကို, ငါသည်ငါ့ ED အစဉ်အဆက်ပိုကောင်း get မယ်လို့ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ရှေ့မှာငါသည်သံသယရှိခဲ့ပေမယ့်သင်တို့ကိုငါပြောပြနိုင်အားလုံးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောရန်ပွဲတိုက်ခိုက်နေသိမ်းဆည်းထားပါ, သူချင်း fapstronauts!
LINK - ဒီတော့နောက်ဇာတ်လမ်းကငါ့ဘဝမှာရှည်လျားတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုပေါင်းများစွာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ ယောနိလိင်ဆက်ဆံစဉ်ငါအပေါ်၌တစ်ကြိမ်နှင့်ငါနောက်ကွယ်မှငါနေချိန်မှာလက်တဆုပ်စာအကြိမ်လာ၏။ များသောအားဖြင့်ငါမလာခင်မှာခြေလက်အင်္ဂါကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ဒီဟာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်လို့ငါအမြဲထင်ခဲ့တယ်
ဒါကြောင့်ငါ nofap စတင်ပြီးနောက်ငါဆက်ဆံရေးသို့ရပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်က၊ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ခံစားရသောမည်မျှကြီးမားပြီး ပို၍ ခက်ခဲပြီးကျွန်ုပ်၏အသင်း ၀ င်နှင့်မည်မျှ ပို၍ ကျွန်ုပ်ခံစားရသည်ကိုကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။ ငါသည်လည်းထိပ်ပေါ်မှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာလာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ မနေ့ကပဲငါလာမယ့်ဆန့်ကျင်မှုတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ရပြီးသူမကိုကျေနပ်အားရမှုရစေတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြီးမားသောဆုလာဘ်ဖြစ်သည်ဟုပြောစရာမလိုသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရန်နှင့်သင်ယူရန်အတွက်အရာရာအသစ်ကိုပေးသည်။
သို့သော်နေဆဲငါ porn စောင့်ကြည့်ဖို့အထူးသဖြင့်ထိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောရမ္မက်ရတစ်ခါတစ်ရံငါ nsfw-subreddit သို့ကြည့်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်, ဒါပေမယ့်ငါသည်အလျင်အမြန်ပြုလုပ်ပိတ်ပါ။ သင်ပြုတန်ဖိုးရှိရှိဘာမျှမနှင့်အတူသူတို့အားပျင်းရိနာရီရှိသည့်အခါအဆိုပါအပြင်းထန်ဆုံးရမ္မက်တနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပျက်။ ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်အချိန်ငါစီးသွား, ဒါမှမဟုတ်တောင်တက်များအတွက်အဲလ်ပ်တောင်တန်းထိမှန်နိုင်သည်, ယနေ့ငါ့အလမ်းစက်ဘီး Fixed! ခိုင်ခံ့နေဖို့, စစ်မှန်တဲ့နေဖို့။
4 လကြာ nofap (1 လအတွင်း5အချိန်) ED သွားပြီ။
ငါ့နာမကိုနှိပ်ပါ, အပြည့်အဝဇာတ်လမ်းအဘို့အကြှနျုပျ၏သည်အခြား post ကိုဖတ်ပါ။
ED ယခုသွားပြီနှင့်ဈ horny 24 /7ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်မျှမတို့ပြဿနာတက်ရနိုင်သည်။ ထိုအခါငါပင်နေ့စဉ်အခြေအနေများတွင်ဖွင့်ရ, ကရှင်းပြဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအသက်ရှင်လျက်ခံစား။ ကိုယ့်အပြားပြားမှအပြီးအပြည့်ပြန်မရတော့ဘူး ငါတစ်ခါတစ်ရံသူကတက်နိုင်, ဒါပေမယ့်ငါ့ဒစ်ခဲယဉ်းဘူးဘယ်မှာ။ ပြီးတော့ငါ libido နည်းနည်းခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့် horni ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှင်းပြဖို့ခဲယဉ်းသည်။ ယခု၎င်း၏အားလုံးကောင်းသော။ ဒီတော့ငါတို့အဆိုးဆုံးလူသားအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ် ..
ကအကူအညီ fuking အဆိုပါ kegEls လုပ်ပါ။
PMO ၏ MO ကို (softcore နှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းမှ) နှင့် 29 နှစ်ပေါင်း 17 နှစ်ပေါင်းအစွန်းရောက် / fetish porn မှမြင့်တက်နှင့်အတူဏ 12 က y / ။ ငါကိုမှန်ကန်လိင်စိတ်ဝင်စားချွတ်စတင်ခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါကလိင်ကနေဖြစ်ခဲ့သည်ထက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့ကြောင်းဖွင့်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းကနေဖြန့်ချိခံစားရတယ်။ porn န့်အသတ်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း, ဈဈကြောင်းမိနစ်အပေါ်မြင်ချင်သောအရာကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ။
နောက်ဆုံးတော့ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကအရမ်းဆိုးလို့ရပ်တန့်ချင်ခဲ့တယ်။ ငါနာရီပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမကြာခဏအော်ဂင်စ်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုလိုအပ်သည်ဟုခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။ ငါ၌ပြproblemနာရှိကြောင်း၊ ဂူဂဲလ်နှင့်ပုံပြင်များကိုဖတ်ရန်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး PMO ကိုရှောင်လိုသည်။ ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်သွားပေမယ့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ NoFap ရဲ့နံပါတ် ၇၀ (ညစ်ညမ်း၊ စူးရှခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စမရှိပါ) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းလာတယ်လို့ခံစားခဲ့ရပြီးအခုဆိုရင်ငါကောင်းကောင်းအောင်မြင်စွာနဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ငါ့မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလိုသောဆန္ဒများနှင့်ငါ့ရုန်းကန်မှုမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင့်ဦးနှောက် dopamine လွှတ်ပေးတိုးမြှင့်ဖို့သူ့ဟာသူ rewires ။ လိင်တိမ်းညွတ်ဦးနှောက်ကိုတောင်းသည်မှာ, တုံ့ပြန်မှုသောအရာကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ စွဲ fappers autosexuals နှင့်မလိင်ကွဲ / လိင်တူဆက်ဆံကြသည်။ ဆွေးနွေးပါ။
ငါနှစ်အတော်ကြာများအတွက်လိင်တူဆက်ဆံသူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းထပ်တူထပ်မျှမိန်းကလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ၁၅ နှစ်ပြည့်ညပြီးနောက်၌ကျွန်ုပ်နှင့်မတူပါ။ ငါ့ဘဝတစ်ချိန်ကငါမိန်းကလေးတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒီနောက် ED ဟာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ပေါင်းစပ်ခဲ့တယ်။ ငါဘယ်တော့မှအခြားသူတစ် ဦး နှင့်အတူလိင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်သော်လည်း။ fuck ဆိုတဲ့အဖြစ်စိတ်ကျရောဂါ။
ထို့နောက်အချို့သောအရာများဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့ကျွန်တော်နိုးလာသည်။ ကျွန်ုပ်ကလက်တွဲဖော်မလိုချင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ချစ်သောအမျိုးသမီးနှင့်ကျွန်ုပ်၏သားသမီးများမွေးဖွားခြင်းမပြုပါ။ အဲဒီအချိန်မှာငါ nofap စလုပ်ပြီး ED ဆေးတွေအတွက် script တစ်ခုရခဲ့တယ်။ ငါမရှိသေးဘူးဆေးတွေကိုသုံးနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာ SO (သိသာထင်ရှားတဲ့အခြားတစ်ယောက်) ရှိတယ်။ ငါ့အသက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကထက်အဆ ၁၀၀၀ ပိုကောင်းတယ်။
အသက် ၄၀ လည်းရှိသေးသည်ကိုသတိပြုပါ။ ငယ်ရွယ်သောလူငယ်များအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာပြန်ဖွင့်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ မင်းဒီမှာဒီမှာတွေ့နေရတယ်။ မင်းကံကောင်းပါစေ!
porn သွေးဆောင် ED အခြေခံအားဖြင့်သွားကြောင်းဖြစ်ပါသည်
ငါ 1 ထံမှ 10 မှ rated တိုင်းတစ်ခုတည်းစိုက်ထူအတူစာရင်းဇယား, ရှိသည်။
တစ်ခါတလေစိုက်ထူခြင်းကနေ ၃ ကနေ ၇ အထိအထိအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်လေ့ရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့တစ်ခါမှမထနိုင်ခဲ့ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာရာထူးအချို့မှာပြုတ်ကျသွားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ယခုငါ အမြဲ ကတက်ရပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူတသမတ်တည်း 7s, 8s နှင့် 9s ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးစက်လည်ပတ်မှုရက် ၂၀ မှာပြည့်တန်ဆာမကိုကျွန်တော်မတွေ့တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ငပဲပေါက်ကွဲတော့မယ်လို့ခံစားရတယ်။
အဆိုပါဆန့်ကျင်ဘက်ကာလအဖြစ်ကောင်းစွာလမ်းတိုတောင်းသည်။ ငါ ၃ နာရီအတွင်း ၃ ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ဇီဝကမ္မဗေဒပါ မဖြစ်နိုင်သော တစ်နှစ်အကြာ။
ခဲယဉ်းရန်အတွက်နို့စို့ရန်ကျွန်ုပ်ဒစ်ကိုမလိုအပ်ပါ။ အဝတ်အစားတွေကိုချွတ်ပြီးတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ထိမိတာနဲ့ချက်ချင်းပဲခက်ခဲသွားတယ်။ ငါသည်လည်းညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုသည့်ပြည့်တန်ဆာမလိုအပ်ပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူ၊ ဆတ်တဲ့သူ၊ ထွားသူ၊
ငါသည်လည်းသတိပြုမိတာကမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောရန် ပို၍ လွယ်ကူကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး မနေ့ကငါဘားမှာမိန်းကလေးတစ် ဦး ထံချဉ်းကပ်ကျနော်တို့ကအရမ်းကောင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းဘူး၊ ငါလိုချင်ရင်နာရီအတော်ကြာစကားပြောနိုင်တယ်။
ငါ့ဘဝမှာညစ်ညမ်းရုပ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်တော့မယ်မထင်ဘူး။ ငါလုပ်ရင် ED ပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
89 ရက်ပေါင်း (90 ဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းစွာအနီးကပ်) ။ ပညာရေးကိုကျော်လွှား။ အကြှနျုပျ၏ပုံပြင်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်နီးနီးနီးကပ်နေပြီဆိုတော့သတင်းပို့နိုင်မှာပါ။
နောက်ခံသမိုင်း: 31, အထီး, လက်ထပ်,6ပေါင်းနှစ်ပေါင်း SO နှငျ့အတူရှိခဲ့။ nofap မစတင်မီအကြောင်းကို6လကြာ ED ထံမှခံစားခဲ့ရသည်။ အကြှနျုပျ၏ကနဦး post ကိုနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း:
ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာ Flatline ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါအမြဲတမ်းပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမပြုမီ flatlines3နှိပ်ပါ။ ပထမပုံစံသည်ရက်ပေါင်း ၀ -၂၈ ရက်၊ ဒုတိယတစ်ခုမှာရက် ၃၁-၃၈ မှဖြစ်ပြီးတတိယမှာ ၄၇-၅၂ မှဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအပြားမှ စ၍ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကပိုမိုမြင့်တက်လာသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်လေးကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါကလုံးဝမကြုံစဖူးဖြစ်လိမ့်မည်။ libido နဲ့ကျပန်းအစာစားတဲ့အချိန်အထိအထက်တန်းကျောင်းတက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။
လျှို့ဝှက်ချက်များရှိလား။ တကယ်မရှိ fapping ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်သည်အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယူပြီး multivitamin (ဗီတာမင် C နှင့်ငါးရေနံ)
တစ်ပတ်ကို 2-3x လေ့ကျင့်ခန်း (တစ်ခါတစ်ရံကျွန်မဒီလက်လွတ်ပေမယ့်ငါ။ အိပ်ရာထဲမှာအပါအဝင်နိုင်ပါတယ်နေရာတိုင်းမှာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ haha) ။
သင်သည်မည်သည့်နှိုးဆွသောရုပ်ပုံများကိုမဆိုမကြည့်နိုင်၊ ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည့်အရာများကိုမဖတ်နိုင်ဟုပြောသူများရှိသည်။ ထင်ရှားသောနိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး ၏စကားတွင် "မာလာကီ!" ငါ nofap ကိုစတင်ကတည်းက r / sex လေ့လာခြင်းအကြောင်းအရာတွေအတွက်အချိန်အများကြီးကုန်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါအဲဒီမှာတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေစိုက်ထူမှုအမြောက်အများရခဲ့ပေမယ့်ငါ့လက်ကိုအဲဒီမှာမထားခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်ဇနီးအတွက်သိမ်းဆည်းသည် အဲဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ အဲဒါကိုသင်ပြီးတာနဲ့သင်လိုချင်တဲ့မည်သည့်ခလုတ်ကိုမဆိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ED ခံစားနေရပြီးကြသည်သောသူတို့အဘို့, တစ်ဦးပါ nofap ပေးပါ။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲငါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်စိတ်ကူးထက်ငါ့အလိင်ဘဝလမ်းပိုကောင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်း - ကျွန်ုပ်သည် DE နှင့် ED ကိုပြင်ဆင်ရန်ပြီးခဲ့သည့်မေလကစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝကုသမှုမခံရသေးသော်လည်းအရာများစွာသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးဆက်လက်တိုးတက်ရန် (ဖြည်းဖြည်းချင်း) ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
ငါပြီးပြည့်စုံတဲ့မဟုတ်ခဲ့ ငါလုံးဝမ PMO သို့မဟုတ်လိင်၏ပထမ ဦး ဆုံး 2.5-3 ရက်သတ္တပတ်သွား၏။ ထို့နောက်ငါ (O အပါအ ၀ င်) နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ကျွန်ုပ် DE သည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့! ဘယ်လောက်နာကျင်မှုလဲ တော်တော်ပြင်းထန်တယ် ထိုအခါငါ ED အများကြီးတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှု။
ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် PM မပါရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် O (အပါအဝင်) နှင့်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ED ဆေးဝါးများသောက်ခဲ့သည်။ (ငါအရမ်းခဲယဉ်းလိုသည့်အခါတစ်ပတ်လျှင် ၁x ဖြစ်နိုင်သည်။ ၂၀-၈၀% သောဆေးများသောက်သုံးခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်။ အများအားဖြင့်ဆေးများမရရှိနိုင်ခဲ့ပါ… .BTW, PMO မတိုင်မှီတွင်ကြက်လက်စွပ်ကိုကျွန်တော်သုံးရသည်။ 1mg Cialis (20x max ထောက်ခံသည့်ဆေး) နှင့်ကျွန်ုပ်သည် PIV နှင့်ပြtroubleနာရှိသေးသည်။ DE နှင့်ပေါင်းစပ်။ ဤအရာသည်အများအားဖြင့်လိင်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ED သည်တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်လပိုမိုကောင်းမွန်လာသော်လည်းစုံလင်ခြင်းနှင့်မနီးစပ်ပါ။ ၎င်းကိုဆေးဝါးများဖြင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး PIV သည်ဆေးမပါဘဲလုပ်နိုင်သည်။ ငါအကြိမ်အနည်းငယ်အကြိမ်အကြိမ်အကြာတွင်ငါအဘယ်သူမျှမဆေး PIV ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါဆေးဝါးများနှင့်အတူပင် 5-7 နှစ်ကဒီလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
ထိုအခါအမှုအရာနည်းနည်းထွက်ရပ်တန်။ ငါမှာပျော့ပျောင်းသော -oforn porn (topless ဓာတ်ပုံများ ... ခက်ခဲတဲ့ core ကိုနှင့်ဗီဒီယိုမရှိ) edging နှင့်ကြည့်ရှု relapses အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်အမှတ်အသားကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီးရှေ့သို့ရွေ့သည်။ ငါပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်၊ soft / porn ဟာအတော်လေးသေးငယ်တဲ့အခန်းကဏ္haveကနေပါ ၀ င်လာတယ်။ ငါကစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တာထက်ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူ porn / photos တွေကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီအရာတွေအားလုံးဟာကြီးမားတဲ့ပမာဏမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ငါလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော့်ကိုပြန်ထားလိုက်ပြီဆိုတာသေချာပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် (လူများအားစီမံခန့်ခွဲမှုအရ) ဆုလာဘ်စနစ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်သိထားရာများအပေါ် အခြေခံ၍ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသောဆုများသည်များသောအားဖြင့်တည်ငြိမ်သောဆုများထက်ပိုမိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ငါ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း / အပြောင်းအလဲ / ခဏခဏဖြစ်ပျက်မှုမရှိသောအနားသတ်ထားသော“ အချိန်ဇယား” သည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်အပေါ်အားကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်ပိုမိုခက်ခဲစေခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်တွေးမိသည်ထက်ကျွန်ုပ်ထင်သည်ထက်အနည်းငယ်ပြန်စဉ်းစားမိခြင်းဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်က topless ဓာတ်ပုံများသို့ပြန်သွားပြီးနောက်ငါသည် ပို၍ ခက်ခဲသည့်အရာကိုသွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် PIV လိင်နှင့်ပင်အော်ဂဇင်ကိုငါမကျူးလွန်ခဲ့ပါ။ ထိုအချိန်မှ စ၍ အော်ဂဇင်မရှိ၊ PMO မရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဇနီးနှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၁-၂x / တစ်စလောက်လိင်ဆက်ဆံနေသည် (နွေရာသီတွင်တစ်ပတ်လျှင် ၂-၄ ဆ) ။ ငါအော်ဂဇင်မတိုင်မီရပ်ပါ
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်၊ နှစ်နှစ်၊ ငါကိုယ်တိုင်အော်ဂဇင်ကိုအနီးကပ်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါ၊ သို့သော်ထိုသို့မလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ခဏတာခံစားရင်းအာရုံခံစားမှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးရပ်တန့်သည်။ သူမ၏အခြားနည်းလမ်းများတွင်တစ် ဦး အို) ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုအော်ဂဇင်လုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်တော့ငါအော်ဂဇင်တဲ့အခါငါ (ယေဘုယျအားဖြင့်) ကောင်းမွန်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုရှိနေလို့ပါ။ ငါ PIV ကာလအတွင်း (စာသား) command ကိုအပေါ် cum နိုင်ခဲ့ဖူးပေမယ့်အလေးအနက်လမ်းအတွက်ထိုစွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကွောငျး, အော်ဂဇင်ဖို့သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်အချို့သောလေးနက်သောအလိုတော်ပါဝါကြာပါသည်။
ငါ့ရဲ့အော်ဂဇင်အစီအစဉ်ကကူညီနေလားဆိုတာမပြောတတ်သေးဘူး။ ငါမှာတစ်ပတ်ခန့်အအေးမိနေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါ။ သို့သော်နောက်ဆုံး PIV နည်းနည်းဖြင့်၊ ငါသည်အော်ဂဇင်အားလုံးကိုဖျက်သိမ်းရန်မဆုံးဖြတ်မှီလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းသည့်စိုက်ထူမှုရှိခဲ့သည်။ နှစ်ကုန်တွင်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအခြေအနေမှတိုးတက်မှုမတွေ့ပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရန်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ငါ soft soft ဓာတ်ပုံများကို“ အပြစ်မဲ့” ကြည့်ရှုခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် K9 ကို install လုပ်ခဲ့သည်။ ငါတကယ်ခက်ခဲတဲ့ core ကိုမကြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိတော့ဘူး (မဟုတ်သလိုဗီဒီယိုလည်း)၊ ဒါပေမယ့်လှပတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံတွေကဆွဲဆောင်နိုင်ဆဲ (topless or not) ။ ၎င်းကိုဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းပြီး၎င်းအားရေးချခြင်းသည်မိုက်မဲပုံရသည်၊ သို့သော်ယင်းသည်၎င်းအားဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ K9 တပ်ဆင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တွင်စကားဝှက်ရှိသော်လည်းစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်မှာသံသရာကိုရပ်တန့်ရန်လုံလောက်သည် (အနည်းဆုံးတော့ယခုအချိန်အထိ - ကျွန်ုပ်သည်ရှေ့သို့ရွေ့နေသည်ဟုထင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ခလုတ်သည်ချစ်စရာကောင်းသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ၏ဓာတ်ပုံကိုတွေ့လိုက်ရပြီးနောက်အလွယ်တကူအလျင်အမြန်လှည့်ပတ်သွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ soft-core ကို reddits ၏တ ဦး တည်းရန်) ။ ဒါကြောင့်ငါလိုချင်ရင်ငါကျော်လွှားနိုင်ပေမဲ့အကျိုးရှိပါတယ်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်လိုချင်သည်ထက်နှေးကွေးလျှင်၊ သင်၏ PMO ရှာပုံတော်တွင်သင်မည်မျှ“ စုံလင်ခြင်း” ရှိသည်ကိုအမှန်တကယ်စစ်ဆေးပါ။ ငါထင်တာကတော့ရံဖန်ရံခါမှာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြန်ဖြစ်တာကလူအများစုသဘောပေါက်တာထက်အများကြီးပိုဆိုးတယ်။ အကယ်၍ မင်းကစစ်မှန်တဲ့လိင် (ဒါမှမဟုတ်အစစ်အမှန်လိင်) နဲ့အော်ဂဇင်ကိုခွင့်ပြုခဲ့ရင်၊ အဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ (သို့) လမ်းပြန်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ လူတိုင်းကကွဲပြားခြားနားစွာတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ တခါတရံဒါကပကတိ ... ဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် ... မရှိပါ ဒီဖိုရမ်ပေါ်မှာ posted မပြုမီပေမယ့်ယနေ့ငါ့အဘို့နေ့ရက်ကို 90 ဖြစ်ပါတယ်, ငါဒီကိုလုံးဝအလုပ်လုပ်တယ်သောသင်ယောက်ျားတွေအသိပေးချင်ပါတယ်! ဒီဖိုရမ်ရှာဖွေခြင်းအစဉ်အဆက်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်သောအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ PMO ကနေဝေးနေပါနှင့်သင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ငါတူပြဿနာရှိရမည်ကြောင်းမည်မျှယောက်ျားတွေထွက်ရှိမယုံနိုငျသညျ, P ကိုနေရာတိုင်းဤသည်နေ့ရက်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပထမဦးဆုံးကဒီမှာတိုင်ကိုဖတ်ရတဲ့အခါကျွန်မချက်ချင်းဤအမှုသည်ငါ့ပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်သဘောပေါက်နှင့်နောက်ပိုင်းကရှောင်ရှားခဲ့သည်။ ငါပြန်မသွားနေပါတယ်။ ငါကငါ့ကိုမအဘို့ကြီးစွာသောလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ခဲ့သည်, သင့်ပုံပြင်တွေမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်ပါတယ်။
ပြန် reboot, unboot နှင့်နောက်တဖန် reboot! ဒုတိယလိင်မဟုတ်ပါ ED! (ကျွန်တော်ကပြန်လာပြီ)
အောင်မြင်မှု - ဒုတိယအလိင်မ ED
ဒါကယောက်ျားတွေပဲ ငါ ED မရှိဘဲငါ့အသက်တာ၌ဒုတိယအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည့်နောက်ဆုံးအကြိမ်ကဲ့သို့။ ငါ 100% ခက်ခဲ 100% အချိန်ရတယ်, အစအ ဦး ကတည်းက။ အခုငါသာသနာပြုစံသတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ဘဲနောက်ကွယ်မှာအခြားရာထူးနေရာများစွာကိုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ ငါ့အဘို့ယခင်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယ။
ငါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ၌တဖန်ငါ rebooted ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကသွားသင့်တယ်သိတယ်။ ဘယ်လို reboot လုပ်ရမလဲ။ အတွေးတစ်ကိုယ်တည်းနှင့်နံနက်သစ်သားဖြင့်နေ့ကိုစိုက်ထူနိုင်သည်။ တစ်နေ့တာမှာစိုက်ထူမှုပေါင်းတစ်ထောင်လောက်တောင်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ပထမဆုံးနေ့တွေမှာတော့သူကထပ်မံအလုပ်လုပ်တာကိုကြည့်ဖို့ပဲစိုက်ထူခြင်းကိုအတင်းအကျပ်ကြိုက်တယ်။ Reboot လုပ်ပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့မှာအနည်းဆုံးစိုက်ထူမှုဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ သင်သည်လုံးဝစိုက်ထူမှုမရှိသည့် flatline နှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။
ED နှင့်အတူလိင်: ဆုံးရှုံးစိုက်ထူ, dificult
အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ငါသည်လည်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး Performance anxiety စိုးရိမ်စိတ် Porn သွေးဆောင် ED ၏အကြောင်းမရှိ။ ဒါကြောင့်ယခုငါနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သတိ tecniques ကိုအသုံးပြုပါ။ ငါ2ကြီးမြတ်လိင်နှင့်4ED ၏နှစ်ပေါင်းခဲ့ငါကငါ့အစိတျကိုအချိန်ကြာမြင့်မည်ကိုယုံသည်နောက်တဖန်အပြည့်အဝယုံကြည်မှုရ။ သို့သော်ယခုပငျအခြို့သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူငါနေဆဲ 100% ခက်ခဲတယ်။
ED ကနောက်ဆုံး4နှစ်ပေါင်း၌ငါ့ကိုအရမ်းစိုးရိမ်စိတ်ဓာတ်နှင့်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ porn ကွာငါ့အသက်ကိုအခြို့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။
t ကို fellas အလုပ်လုပ်တယ်, ကမှာကိုစောင့်ရှောက်
အရူးအမူးစွဲမက်စရာကောင်းတာက ၂၀၀၂ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်သြဂုတ်လမှ ၂၃ ရက်အထိညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကြောင့် ED နှင့် SEVERE နောက်ကျကျန်ရှိခဲ့တဲ့သုတ်ရည်လွှတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ၁၀ နှစ်၊ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံးလိင်ဆက်ဆံစဉ်အော်ဂဇင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အားနည်းခြင်း။ မကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုဆယ်စုနှစ်တစ်ခု။ ဖြစ်နိုင်သမျှနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာဖော်ပြရန်အိပ်မက်ဆိုး။ ကျွန်ုပ်လက်ဖြင့်သာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်ခွာနိုင်ပြီဖြစ်သည်) ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုကိစ္စကိုခံစားနိုင်သည်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးကနေဘယ်မှာ NPMO, & သင်တန်း၏ yourbrainonporn.com မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါ့အသက်ငယ်သောကာလ၌ရန်အသုံးပြုတူသောတဖန်အထွတ်အထိပ်။ တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့ (၃) ပတ်လောက်ပဲကျွန်တော် (၃) ပတ်လောက်ကြာအောင်အရူးလုပ်လိုက်တာအရူးပဲ။ နောက်ဆုံးတော့လအနည်းငယ်အကြာမှာမိန်းကလေးတ ဦး နဲ့အတူအော်ဂဇင်သာသနာပြု။ ၎င်းသည်အဆက်မပြတ်ရုန်းကန်နေရသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ နှင့်တစ္ဆေခွေးလိုပဲ porn = အဆိပ်။ သေပြီလေးနက်တယ်
ကိုယ့်ရှေ့မှာ "quarintine" အဖြစ်တင်ခဲ့သည်
PE ဖြေရှင်းခြင်း - ငါရိုက်ပြီးပြီထင်တယ်
သင်သည် PE သို့မဟုတ် ED ကို fapping မှရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသင်၏ပြaddressနာကိုဖြေရှင်းရန်အသက် ၂၉ နှစ်အထိမစောင့်ပါ။ ငါအခြေခံအားဖြင့် th th နားမလည်ခဲ့ရသည်
ပထမအဆင့်က fap မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏အခြားကိရိယာများမှာ coitus reservatus, kegels, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွက်သားတင်းမာမှု / အသက်ရှူမှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြွက်သားတင်းမာမှု / အသက်ရှူခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဟာပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်ဖြတ်သန်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ အော်ဂဇင်ကိုကြွက်သားတင်းမာမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ ငါစိတ်အေးလက်အေးစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုရှည်လျားတဖြည်းဖြည်းကြာရှည်နိုင်ခဲ့တယ် မဟုတ် ငါ့အသက်ရှူကိုကိုင်ထား။ Kegels တွေကနည်းနည်းလေးကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါသေချာမသိဘူး။ အော်ဂဇင်ကို“ kegel-out” တွင်လုံးဝမအောင်မြင်ပါ။
ငါ kegeling ကိုကျေးဇူးတင်စကားနှစ်ခွန်းနဲ့ဆက်ပြီးငါဆက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ငါခံနိုင်ရည်ကိုမတိုးခဲ့ဘူး။ ယနေ့ငါသွင်းခြင်းမှအစိုင်အခဲနာရီဝက်ကြာ, ငါနောက်ဆုံးတော့ဒီရှက်စရာပြproblemနာကိုရိုက်နှက်တာနဲ့တူငါခံစားရတယ်။ ၎င်းသည်နာရီဝက်ခန့် pussy-pounding လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူမအထဲ၌အပြည့်အဝထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကြိတ်ခြင်း၊
သို့သော်၎င်းသည်ငါအတိတ်ကာလကကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုသို့ခုန်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့ဖူးတာကြာပြီ။ ဘာကြောင့်လဲ၊ အဘယ်သူမျှမ crossover လည်းမရှိ; ဒါကကျွန်တော့်ကိုအိပ်ယာထဲမှာကြာကြာမနေခဲ့ဘူး။ တူညီသောပြproblemနာကိုဖြတ်သန်းသွားထွက်ရှိအခြားမည်သူမဆိုကံကောင်းပါစေ!
FAP ကိုရက် ၁၀၀ ကျော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး ငါဘာတွေလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီ…။
ပထမဦးစွာနဲ့ဗွေဆော်, ငါ 30 အသက်အနှစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်အသက်အရွယ်လောက် 12 နှစ်ပေါင်းမှာ fapping စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မအသက်နှင့် ပတ်သက်. 22 နှစ်ပေါင်းမှာအမာခံ porn မှမှန်မှန် fapping စတင်ခဲ့ပြီးအသက်အရွယ် 29 မှတစ်ဆင့်ကြောင်းဖွင့်ထားဆဲဖြစ်သည်။
ငါ၏အ 29th မွေးနေ့မှာသို့မဟုတ်အနီး, ငါသည်မိန်းမနှင့်ပညာရေးကိစ္စများကြုံတွေ့ရစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအမျိုးသမီးများတချို့ကအတော်လေးဆွဲဆောင်မှု, ငါအပြင်းအထန်နှိုးဆော်ခြင်းများနှင့်အတွေ့အကြုံသို့, ငါ့လိင်တံ, အသေးစားခြေချင်းခတ်နှင့်, ထိုအခိုက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခံစားမိဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းခဲ့ကြသည်။
ငါ NOFAP ကိုစတင်ခဲ့ပြီးပန်းတိုင်ကိုရက် ၉၀ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ငါအဆုံးသတ်သွားတာ ၁၀၀ လောက်ပဲရှိတော့တယ်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ငါပြောနိုင်တယ်။ ဒါဟာကတိကဝတ်အပေါ်အပြည့်အဝကြာပါသည်။ သငျသညျပင် 90% ကျူးလွန်သွားလျှင်, သင်သည်သင်၏ fuck ဆိုတဲ့အချိန်ကိုကယ်တင်သင့်ပါတယ်။ NO FAP 100 ကိုပြီးမြောက်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ သို့သော်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ငါအတွေ့အကြုံအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူရလေ့ရှိတယ်ထင်ပါတယ်။
ပထမ ၃၀ ရက်ခန့်မှာအလွန်ခက်ခဲသည်။ အဲဒီနောက်မှာရက်ပေါင်း ၃၀၊ ၄၀ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ ငါလိင်အကြောင်းတောင်တောင်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ ငါလိင်ကွဲဖြစ်သော်လည်းဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်လိင်ခြားသူဖြစ်သည်။ ဒါကမကောင်းတဲ့အရာလို့ထင်ရပေမယ့်တကယ်တမ်း NO FAP 30 ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာထက်အများကြီးပိုလွယ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့မင်းကိုယုံကြည်ပါ။ မင်းရဲ့မိန်းမတွေရဲ့ဆန္ဒကမင်းဆီပြန်လာလိမ့်မယ်။
တစ်နေ့မှာမင်းက“ ငါ fuck ဆိုတဲ့လိုကောင်လေး” နဲ့တူနေလိမ့်မယ်။ နှစ်လခန့်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်တသမတ်တည်းသောနံနက်ခင်းသစ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့သည်။ ငါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုငါသိတယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ရက်ပေါင်း 100 လောက် fapped ပေမယ့်လာမည့်လ၏သင်တန်းကာလအတွင်းအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ရှောင်ကြဉ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါ fap မလုပ်ခဲ့တဲ့ရက် ၁၀၀ နောက်ပိုင်းမှာငါဟာမိန်းမသုံးယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ၄ ယောက်မြောက်မိန်းမတစ်ယောက်ဆီက handjob, blowjob နဲ့ striptease ကိုလည်းရခဲ့တယ်။ ငါပြောနိုင်တာကအများစုအတွက်ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ချက်ချင်းစိုက်ထူခဲ့တယ်။
ဒါဟာမယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါစာသားငါ့စိုက်ထူအကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်မလိုပါ - ကပဲရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးသဘာဝကျသည်ဟုခံစားရသည်၊ ကျွန်ုပ်သွေးကြောများမှတဆင့်သွေးစီးဆင်းနေသောငါ့နှလုံး၊ ငါ့အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်နေတာ။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်လည်အခြေချပြီးပြီ။
ဒီအမျိုးသမီးတွေနမ်းတောင်မှအခါ, ငါချက်ချင်းမယုံကြည်သောသူတို့ခက်ခဲစိုက်ထူခဲ့သညျ။ ငါသည်သင်တို့ကိုအဲဒီ NOFAP 90 legit ကြောင်းဒီခရီးကိုစတင်အကြောင်းကိုနေသောအသိပေးချင်တယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ ဒါဟာအလေးအနက်ရောဂါများအတွက်အခမဲ့မှီရောဂါပျောက်ကင်းသည်။
နံပါတ် ၉၀ သည်သူ့ဟာသူအလိုအလျောက်ဖြစ်ရာ၎င်းသည်ယုတ်ညံ့သောအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ အချို့သည် ၃၀ အပြီးတွင်ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်သည်။ အခြားသူများနှင့်ကြည့်လျှင် ၂၀၀ ခန့်ကြာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုမည်မျှကြာကြာကြည့်ရှုခဲ့သည်၊ ထိုအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတစ်ချပ်ကိုမည်မျှအကြိမ်ကြည့်ရှုခဲ့ပုံနှင့်ကြည့်ရှုခဲ့သည့်ပုံသဏ္pornာန်သည်အလွန်ခက်ခဲ / ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေယင်းသည်ကုသမှုဖြစ်သည်။ လုပ်ပါ အဲဒါကျိုးနပ်ပါတယ်။
LINK - sayno2porn PMO မပါဘဲ ၈၆ ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝပြန်လည်သက်သာလာသည်။
ငါဒီနေ့လိင်ကိစ္စရှိခဲ့တယ်။ အတွေ့အကြုံကအရမ်းကောင်းတယ်။ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာပြီးနောက်မှာငါအရမ်းပျံတယ်။ နောက်ဆုံးတော့အပျိုစင်ဘဝဆုံးရှုံးသွားတယ် ... အရမ်းရယ်ရတယ်မနှစ်ကငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကငါလိင်အကျင့်ယိုယွင်းခဲ့တယ်။ ဒါကရှက်စရာကောင်းတယ်၊ ငါမထနိုင်ခဲ့တာ၊ ငါမျှော်လင့်ချက်ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရှောင်ရှားရန် ၃ လနီးပါးမလွယ်ကူပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်ရည်မှန်းချက်ကစစ်မှန်တဲ့လိင်ပဲ။
ယခုငါလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ porn သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းကြောင်း၊ သူကကိုယ့်ကိုယ်ကို ၁၀ နှစ်တာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုအတွက်ဖြုန်းတီးခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။ ငါဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာတကယ်ရူးသွပ်တယ်။ Yourbrainonporn.com နှင့်ဤအကြောင်းအရာသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ခရီးအတူတူခရီးသွားသူများသည်မျှော်လင့်ချက်မပျောက်ပါ။ သင်ကျိန်းသေပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်။
အခြားသူကိုအဖြေပေးသည် - ဟုတ်ပါတယ်၊ PMO ကနေ ၈၆ ရက်လုံးလုံးနေခဲ့ရပါတယ် သင်မကြာမီပြန်လည်ထူထောင်လိုပါကသင် M ကိုရပ်တန့်ရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်က ၃ လမဟုတ်ပါ။ ကျွန်မရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတကယ့်လူတစ်ယောက်လိုလိင်ဆက်ဆံပြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ P&M ကိုပြန်မသွားတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာရှုံးနိမ့်သူမဟုတ်တော့အခုလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ။ ငါမိန်းကလေးများရှေ့မှာရှေ့မှာတော့မလှုပ်ဘူး။ အကယ်၍ မင်းမှာတကယ်အားကောင်းတဲ့ခံစားမှုရှိမယ်ဆိုရင်၊
သငျသညျအွန်လိုင်းနှင့်သင်မတော်တဆ porn ကိုရှာဖွေနေသည့်အခါသင်ရုံလုပ်ဖို့ရှိသည်ထို tab ကိုပိတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ .thats ရဲ့ .. ရိုးရှင်းတဲ့။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တခါတရံတွန်းအားသည်အလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့်၎င်းကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသော်လည်းသင် M နှင့် P ကိုကြည့်သည့်အခါတိုင်းသင်၏ကိုယ်ခန္ဓာမှထွက်လာပြီး M&P လုပ်နေသည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနေလျှင်မည်သို့ခံစားရမည်နည်းဟုစဉ်းစားမိသည်။ ငါကမိုက်မဲကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်အလောင်းအစား။ ငါကြည့်တာဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်တာဟာတကယ်ကိုမိုက်မဲတာပဲလေ။ တခြားသူတွေကိုလိင်ဆက်ဆံတာဒါမှမဟုတ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်တာတွေကိုကြည့်တာကဘာလဲ။ ..အဲဒါဘာလဲ?။ နုသောအပြုအမူဖြစ်သည် မင်းဒါကိုနားလည်ရင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး .. ငါ့ကိုယုံပါ။
ငါသည်ငါ့ reboot ပြီးစီးခဲ့နှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုတဖန်ကောင်းသောအလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်ဒါ။ အဘယ်သူမျှမ ED နှင့်ရှားပါးနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်, အလိုအလျောက်စိုက်ထူနှင့်အတူအချိန် 95% အကြောင်းကိုအောင်မြင်သောလိင်။
တဖန်ငါ MO'ing စတင်ခဲ့သည်.
နောက်ဆုံးတော့သူကနောက်ကျောနေ့စဉ်ဖို့ပဲမရောက်မှီတိုင်အောင်, ပြီးတော့ပထမဦးဆုံး 1 သို့မဟုတ်2ကြိမ်တစ်ပါတ်တိုင်း3ရက်ပေါင်းမှာ။ နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပြန် (အောင်မြင်သောလိင် 80 အကြောင်းကို 60% အထိလျော့ကျလာ%) ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ ED ရောက်လာတယ်။
နေ့တိုင်း MOing လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ O ဟာပိုခက်လာတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ porn ကိုစကြည့်တော့တယ်။ မဟုတ်ဘဲအမာခံပစ္စည်းပစ္စယသာပုံရိပ်တွေ။ ငါသည်ဤ ok ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသည်။ အောင်မြင်သောလိင်သည်ယခုအခါ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ပြောတာကငါ့လက်ကိုငါသုံးနေပြီဆိုတော့ထင်းမီးတစ်လက်ဝယ်လိုက်တယ်။ ငါဇာတိပကတိအလင်းနှင့်သုံးခြင်းကိုတိုင်းသုံးရက်နှင့်အဘယ်သူမျှမလက်မှကန့်သတ်ထားသည်။ အောင်မြင်သောလိင်သည် ၈၀% ရှိသည်။ ငါဇာတိပကတိအလင်းနှင့်အတူ O ခက်ခဲအတူရှိခြင်းခံခဲ့ရသည်ဒါကြောင့်ငါပိုမိုခက် porn ကိုရှာဖွေနေစတင်ခဲ့သည်။
အောင်မြင်သောလိင်အကြောင်းကို 60% အထိကျဆင်းစတင်သည်။ ငါခက်ခဲ porn မှာရှာဖွေနေခဲ့သည်ပြီးတာနဲ့ငါကနေ့တိုင်းကိုအလွယ်တကူငါတတျနိုငျသအိုသတိပြုမိသည်။
အောင်မြင်သောလိင်% 50 မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်နှင့်ပညာရေးအတွက်တွားမှစတင်သည်။ ငါကသာလုံးဝကိုယ့်ကိုယ်ကို desensitize နှင့်%2နှင့်ရောနှောသို့ရံဖန်ရံခါ ED မိတ်ဆက်နှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူအကြောင်းကိုမေ့လျော့ငါ့အောင်မြင်မှုနှုန်းကို drop မှ 40 လခနျ့ကိုယူပြောပါလိမ့်မယ်။
ယခုငါရက် 30 အသစ်တစ်ခုကို reboot သို့ပေါ့။ အများကြီးပိုလွယ်ဤအချိန်နှင့်ပိုမြန်။ ငါပြန်ဖွင့်နေစဉ်ဤအချိန်၌ငါ့ဇနီးနှင့်အတူကျန်းမာရေးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ငါ့အလိုရှိသမျှ porn ဖျက်ဆီးခံရသည်။ ငါဒါအမှန်ပဲဆိုတာသက်သေပြ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုနှုန်းသည် ၁၀၀% ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖို့စဉ်းစားလိုက်ရုံဖြင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းများကိုတဖန်တဖန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဘယ်သူမျှမလက်သို့မဟုတ်ဇာတိပကတိ။
လအနည်းငယ်အတွင်းအောင်မြင်မှုနှုန်းကျဆင်းလာခြင်းနှင့်အို၏အတုများပြုလုပ်ခြင်းစသည်တို့၌ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်အားဘယ်သောအခါမျှပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မပြောခဲ့ပါ။ သူမလိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်နည်းလာသည်။ ငါ PMO ပိုပိုပြီး ing ခဲ့ဆိုလိုသညျ။ ဒါဟာစက်ဝိုင်းသံကြီး။ ငါသည်ဤအချိန်စက်ဝိုင်းကိုချိုးဖောက်တာပါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါ porn မပါဘဲအလယ်အလတ်များတွင်အသုံးပြုလျှင်ဇာတိပကတိအလင်းတော်တော်ကြောက်မက်ဘွယ်သောကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ကို sensitivity ကိုတိုးတက်စေပါဘူး။
LINK - 90 နေ့ရက်များနှင့်မျှမ reboot, သွားကစောင့်ရှောက်ခြင်း (self.NoFap) စာသားရဲ့အမှတ်တရ (တောင်းပန်ပါတယ်) အခြားသူများအားတတ်နိုင်သမျှ data တွေကိုပေးဖို့ကြိုးစားနေအောက်ပါအတိုင်း:
ကောင်းပြီနောက်ဆုံးတော့ငါဒဏ္myာရီ 90 ရက်အမှတ်အသားသို့ရောက်ပြီ။ nofap လုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်၏ရေရှည် ED ကို reboot ဖြင့်ကုသရန်ဖြစ်သည်။ ငါ nofap အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့သော ၁၈ လကအကြိမ်များစွာပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီးရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၄၅ ရက်အကြိမ်အနည်းငယ်သွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်း YBOP နှင့် ED သွေးဆောင်မှုအကြောင်းမသိခဲ့ပါ။ ငါအဆက်မပြတ်စိတ်ဓာတ်ကျနှင့် pmo လမ်းလွန်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။
ထိုအခါငါဒီ subreddit ရှာဖွေတွေ့ရှိ ybop ငါရက်ပေါင်း 90 ပြီးနောက်ငါ့စိုက်ထူပြန်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်တံဆိပ်စတင်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များမှာအသက် (၄၀) နှစ်၊ ရေရှည် fapper (၁၅ နှစ်မှစ၍) ရေရှည်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်သောလိင်ဆက်ဆံဖက်များမရှိခြင်း၊ ငါအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတစ်ယောက်တည်းသောယောက်ျားလေးပဲ။ ငါတကယ်လိင်ဆက်ဆံဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်ငါ့ ED အပေါ်သက်ရောက်မှုထင်ပါတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါငါမပြီးဆုံးသေးဘူး။
အခုတော့ငါပြproblemsနာမရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ED ကကျန်နေသေးတယ်။ အခုဆိုရင်ငါဟာရေရှည်ဆက်ဆံမှုမှာ SO ရှိပြီ။ အများအားဖြင့်အပတ်စဉ် ED ဆေးတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတယ်။ ဤ nofap ကြိုးပမ်းမှု၏ပထမ ၅၅ ရက်သည်လိင်မှုကိစ္စမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကတည်းကလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။
ငါသိမြင် nofap ၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးများ; ငါ့စိတ်အခြေအနေတွေတိုးတက်လာတယ်၊ ငါလိုပဲစိတ်ဓာတ်မကျဘူး၊ လူမှုရေးအရအဆင်မပြေဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရငါဟာအကြိမ်သန်းပေါင်းများစွာပိုလို့ကောင်းတယ်၊ ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်အပတ်တိုင်းနာရီပေါင်းများစွာနာရီဝက်ခန့်အနားယူနေသည့်ထိုင်ခုံသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ကျောနှင့်အဆစ်များကိုပျက်စီးစေသည်။ အပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ငါငါ့အကောလိပ်အလေးချိန်ပြန်။ ထိုအခါငါရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ယခုငါရှိသည်, ငါ၏ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အံ့သြစရာပါပဲ!
ငါလုပ်ခဲ့တာတွေ - ညစ်ညမ်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ၊ ပုံမပေါ်တဲ့ပုံတွေမရှိ၊ ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုအရင်ကြိုးစားပြီးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ အခက်အခဲရှိသူမည်သူ့ကိုမဆိုကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်သည်အထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါအရင်တုန်းကကြိုးစားခဲ့တာတော်တော်များများက porn ကိုဖြတ်ပစ်လိုက်တယ် ဒီတော့ညစ်ညမ်းတာကငါ့အတွက်ပြaနာမဟုတ်ခဲ့ဘူး။
ပျက်ကွက်ခြင်း / ပြန်လည်စတင်ခြင်းကိုမကြောက်ပါနဲ့။ ငါအကြိမ်များစွာ reset နှင့်သူတို့ထံမှအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒီ reddit ဟာသင်ယောက်ျားတွေဆီကနေအများကြီးသင်ယူခဲ့ပြီးပြီ။ ငါ့အတွက်လေးနက်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံမှုမှာ၊ မင်းဟာဒီလူကိုလိင်ဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုအပေါ်လုံးဝမှီခိုနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ခြင်းပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်လျှင်သင့်တွင်လက်တွဲဖော်ရှိရမည်။ ဒါကကျွန်မအတွက်အရမ်းလေးနက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါ, သို့သော်, ရက်ပေါင်း 120, 150 သွား nofap စောင့်ရှောက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ နောက်တဖန် fapping စတင်ရန်ငါအစဉ်အဆက်ဘူး။ သင်တို့အားလုံးကိုကံကောင်းပါစေ
TL DR: သေး ED သွေးဆောင် pmo မရှိ reboot ကုသပေးဖို့ nofap လုပ်နေတာ။ ကြောင့် browsing အတွက်, edging သို့မဟုတ်ထိထိမိမိအဘယ်သူမျှမမှအောင်မြင်မှု။ nofap ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်။
LINK - နေ့ 50 ။ လိင်၏စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ငါတို့ဒီမှာ။
ငါရည်ရွယ်တယ် 100 (ဒီဟာက ၉၀ အသစ်လား?) ဒါကသင့်ရဲရင့်တဲ့ယောက်ျား၊ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကဒီမိန်းကလေးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်၊ ငါသူမနှင့်အတူ ED ရှိခဲ့ nofap ရှင်းပြသည်, သူသည်အလွန်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ သို့သော်…မနေ့ညကကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်၊ လျှပ်စစ်!
ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကနွေးထွေးနေပြီးခံစားရတယ်။ ၅ နှစ်ကြာလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် (PMO'ing ofc) အစဉ်အမြဲခံစားခဲ့ရဖူးသည်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကြည့်ရင်းပြုံး၊ ရယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုက်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်ထိုအရာသည်လျှပ်စစ် ပို၍ ပင်ခံစားရသည်။ သူမသည်ဟောင်းများပိုင်ဆိုင်မှုကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သူမအကြိုက်ဆုံးကြက်ဟုဝန်ခံသည်။
ကျနော်တို့ဒါကောင်းစွာချိတ်ဆက်ယင်း၏အကြောင်းမရှိခန့်မှန်းငါကျနော်တို့မေတ္တာ၌ဖြစ်နိုင်သည်ထင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုဒီနည်းကိုအိုင်တီထိုက်သည်ကိုသင်မိတ်ဆွေများကိုပြောပြပါရစေ။ porn လိင်သင့်ရဲ့မျှော်မှန်းချက့်ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေ။ စစျမှနျသောလိင်တစ်ဦးကမလုပ်ဆောင် IS။ မစိုးရိမ်ပါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ သငျသညျသူမ၏ / သူ့အတွက်ဖျော်ဖြေကြသည်မဟုတ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ရာပူဇော်သက္ကာကိုနှင့်လူတစ်ဦးနှင့်အတူချိတ်ဆက်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်ခြင်းနေကြသည်။ အခြားမည်သူမဆိုဒီကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပါသလား
TL: ဒေါက်တာ: စစ်မှန်တဲ့လိင်ဟာစာသားအရ 'ချစ်ခြင်းမေတ္တာ' လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ် Nofap ငါ့ကိုဒီအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
NoFap မှာ relapses, ဒါပေမယ့် PornFree လမ်းခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်မရှိသေးပါ
ဘဝကရယ်စရာကောင်းသည်။ ငါ (nofap bandwagon) ပြုတ်ကျသွားသည်။ (ကျွန်ုပ်လမ်းမှားနေသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လုံလောက်သော privacy ကိုရနိုင်သည့်အခါတိုင်းတစ်နေ့လျှင် ၃ ရက်နှင့်တစ်ပါတ်ထက်မပိုပါကတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်များစွာမဟုတ်ဘဲ) ။ ငါတကယ်လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပုံရသည်။
သို့သော်လည်းငါသည်ယခု 26 ရက်များအတွက်အခမဲ့အခမဲ့ပါပဲ။ (ငါရံဖန်ရံခါငြိမ်အဝတ်အချည်းစည်းမြင်သည်နှင့်ပြန်လည်စတင်ခြင်းမရှိပါ။ ငါ့အလေ့အကျင့်မြန်နှုန်းမြင့်ဗီဒီယိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုနေ့တိုင်း faps ခဲ့။ ငါ 26 ရက်ကြာ tubesite (သို့မဟုတ်အခြားဗီဒီယိုအရင်းအမြစ်) ကိုမသွားဘူး။
အဆိုပါအရာဖြစ်၏ - ထိုအစိတ်အပိုင်းကိုလွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအပျိုဖော်ဝင်ချိန်ကတည်းကညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူဖြစ်သော်လည်းညစ်ညမ်းမှုကိုရှာဖွေရန်ဖိအားပေးခံရသည်ဟုမခံစားရပါ။
ကျွန်တော့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့သတင်းကငါဟာနှစ်သစ်ကူးအကြိုနဲ့နှစ်သစ်ကူးနေ့ကိုသတ်မှတ်လိုက်ပြီး ED နဲ့ပြproblemsနာမရှိပါဘူး။
ငါ nofap ကိုပြန်သွားရင်ငါ DE လည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်။
Brandon79 ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်34 ရက်ပတ်လုံး
ငါ NoFap ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်ကတည်းကလုပ်နေတယ်။ ပြီးတော့ငါအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာငါခံစားခဲ့ရတာထက်ပိုနေတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ်သောကရောက်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရခြင်းဖြစ်သည်။ အခုအချိန်မှာငါတောင်မှဖြုတ်ချမရနိုင်တူသောခံစားရတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့် ၅ ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးအချိန်တိုင်းတွင်ကွန်ဒုံးနှင့်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ လိင်မှုကိစ္စကို ၅ လသို့မဟုတ်တစ်ကြိမ် (လိမ်လည်မှုမရှိ) တကြိမ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံရန်“ ကြိုးစား” ဟုခေါ်ဆိုသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ၊ ဆေးဝါးတွေမစွမ်းဆောင်နိုင်တာကိုငါအပြစ်တင်လိမ့်မယ်။ ငါအခုအရမ်းခံစားရတယ်။ ဒါကလူတိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့အရာပဲ။ အဲဒါကိုမလှည့်စား, ရုံစည်းကမ်းရှိပါတယ်။ ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းကူညီပေးသည်။ ငါကလူတစ်ယောက်လိုလုပ်တာကိုမုန်းတယ်။ ဒီဟာကိုကျွန်တော်အရမ်းပျော်နေပြီးဆက်လက်ပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ဘဝကဏ္ aspects အားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာသည်ကိုခံစားနိုင်သည် အလုပ်မှာ, လူမှုရေး setting များကို, ငါ့မိသားစုနှင့်။
အသက် ၃၀ နှစ်။ ၎င်းသည်သင်အမှန်တကယ်သိထားရန်သာလိုအပ်သည်။ ယခုစတင်ပါ
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပျက်ကျမှု 2012 ၏ဒုတိယတစ်ဝက်၌ငါ့ကိုဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာငါဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုမျှစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျအများတို့သည်လည်းသိကြသည့်အတိုင်း, သင်တို့၏ကိုယ်ထည်, ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသင့်ရဲ့လမ်း, သင့်ရဲ့အထောက်အထားအားလုံးကြီးမားသောသံသယအောက်မှာလာကြ၏။ ဤ site ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ဂယ်ရီ Wilson ကအလွန်ကြီးစွာသောကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤ post ကိုဒီ site ပေါ်တွင်အခြား info ၏သက်သေအထောက်အထားများ၏အလေးချိန်မှပင်အချို့အလွန်သေးငယ်သောလမ်းထဲမှာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပြproblemsနာများဖြင့်ဤဆိုဒ်ကိုသင်တွေ့ရှိပါကယခုအခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွန့်လွှတ်ပါ။ ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာယူပါလိမ့်မယ်, ကရုန်းကန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကပိုကောင်းအောင်သင်လုပ်ရမယ်။
ငါသည်ဤ post ကိုအခြားအနာလန်ထူပုံပြင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးတိုကိုသိပေမယ့်ကိုယ့်အချို့နဲ့အခြားပုံပြင်များပြီးသားတကယ်ကောင်းစွာအမှုအရာ၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြပြီးကိုယ့်လူမျိုးကိုလှုံ့ဆျောပေးကူညီဖို့ရန်နောက်ထပ်အပြုသဘောဆောင်ပုံပြင်ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုခငျြခံစားရသည်။ သို့သော်မည်သူမဆိုမည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်လျှင်ပဲမေးပါ :)
အတွက် 35 ရက် - DE သွားပြီ ED သွားပြီ
ငါ GF အသစ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာပဲမြင်တယ်၊ တခါတလေသူ့ကို ၃ ပတ်လောက်မတွေ့ရဘူး။ NoFap မစခင် ၂ လလောက်မှာသူနဲ့အတူအိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့အင်္ကျီကိုကြိတ်ပြီးကြိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မငပဲကမလှုပ်ရှားခဲ့ဘူး၊ မှာအားလုံး။ ငါအသက် ၁၉ နှစ်ကတည်းက ED နဲ့ DE ကိုသိခဲ့ပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ လကမှလေးလေးနက်နက်ပြissueနာဖြစ်လာတယ်။ မိန်းမတွေနဲ့အတူလုံးဝအားမရှိခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်း၊
ဒါကြောင့်ငါအပြာရောင်ဆေးလုံးကို GF နဲ့အကြိမ်နှစ်ခါယူခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒါ ED အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အိုမင်းမရနိုင်ဘူး။
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေ (NoFap အပေါ် 4th Week) ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အကူအညီပေးသူကိုမျှမယူခဲ့ပါ။ ငါမလိုချင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကမကျန်းမာဘူး၊ Via9ra ယူတာကတစ်နည်းနည်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်။ သို့သော်သူမနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ငါ၌တစ်နာရီခန့်အစိုင်အခဲရှိသောသဘာ ၀ စိုက်ထူမှုတစ်ခုရှိခဲ့ပြီးသူမ၏အဝတ်အချည်းစည်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်အားပိုမိုနှိုးဆွခဲ့သည်။ ကျွန်တော် O. မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ ၃၅ ရက်မြောက်နေ့တွင်မှော်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးကိုနမ်းခြင်းနှင့်ထိမိခြင်းကတစ်ခါမျှငါ့ကိုမလှည့်စားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ခဲယဉ်း။ ကွန်ဒုံးဖြင့်ပင်ပင်ပန်းစွာနေခဲ့ရသည်။ အခုတော့ဒီမှာပါ။ ငါအချိန်မရွေးအော်ဂင်စလုပ်နိုင်တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး၊ ငရဲလိုပြင်းထန်လွန်းတယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်စရာမလိုအပ်ဘူး၊ အပိုထပ်ဆပ်စရာမလိုအပ်ဘူး - ကွန်ဒုံးနဲ့အတူ! နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အချိန်ကိုပင်ကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ အိုကျွန်ုပ်နှင့်မိန်းကလေးကြားရှိရာဘာ
ငါ fapstronauts ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ မင်းကိုမင်းမရှိရင်ငါပြန်သွားချင်တဲ့နေရာမှာအနည်းဆုံး ၁၀ ဆလောက်ဖြစ်မယ်။
TL; ဒေါက်တာ: NoFap porn သွေးဆောင် ED နှင့် DE အဘို့အအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာခဏတစ်ယူစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် ED ပင်ပြင်းထန်အမှုပေါင်း recover ကြဘူး။ ယုံကြည်ချက်ရှိပါ!
ဧပြီ 06, 2013
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၉ နှစ်ရှိပြီ၊ ၈ တန်းမှစပြီးနာတာရှည် MB ဖြစ်လာသည်။ အထက်တန်းကျောင်း၊ ကောလိပ်တလျှောက်လုံးကျွန်တော့်အသက် ၂၀ ကျော်သည်ကျွန်ုပ် MB ။ ငါငှားရမ်းထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ အမျိုးသမီးများတီဗွီတွင်လှည့်လည်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများ၏ပုံပြင်များတင်ခြင်း။ အသက် ၂၁ နှစ်မှာကျွန်မရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါး GFs များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ငါပိုက်ဆံရှိတဲ့အခါ, အစောင့်အကြပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမ်စတာဒမ်နှင့်မက္ကဆီကိုရှိပြည့်တန်ဆာဆောင်များသို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါစိုက်ထူနှင့်အတူပြaနာမရှိခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ငါတော်တော်လေးကြွယ်ဝပြည့်စုံဖြစ်၏။ ကျွန်တော့်အသက် ၂၀ ကျော်မှာအမျိုးသမီး ၅ ယောက်ရှိရမယ်။ အစောင့်အကြပ်များကသင့်အားကောင်းမွန်စွာပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းသင့်အားပြောပြသောအခါသင်ကသင့်အားကောင်းမွန်သည်။ ငါအမှားတွေရတဲ့တစ် ဦး ကပြHနာရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ရောက်သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအခန်းဖော်တွေနဲ့နေခဲ့ရပြီးနောက်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်နေရာရခဲ့သည်။ ငါ Broadband အင်တာနက်ကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ MB ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ငါအွန်လိုင်းရှာဖွေနိုင်ရန်ဒါဟာတစ်ပါတ်နှစ် ဦး ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်နွေ ဦး ရာသီ ဖြစ်၍ အွန်လိုင်းပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သောအရာများ၏ ၁၅ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုနွေ ဦး ရာသီ၌ကျွန်ုပ်သည် Swingers site သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည် (၎င်းသည် Dallas ဒေသရှိကြီးမားသောအရာဖြစ်သည်) ငါအလွန်လှပသောဇနီးနှင့်အတူစုံတွဲတစ်တွဲမေးလ်ပို့ပေးပါ။ ကျနော်တို့အချိုရည်များအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး chatted ဟိုတယ်သို့သွားကြ၏။ ငါ Semi ခက်ခဲတယ်, ပြီးတော့ဘာမျှမ။ ညအကြောင်းအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သိပ်မကောင်းပါဘူး ခင်ပွန်းဖြစ်သူကကျွန်မအားစိတ်ပူနေကြောင်းပြောသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အာရုံကြောများကိုအပြစ်တင်မိသည်။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်မှာ၊ တူညီတဲ့အရာကထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ပျက်မယ်၊ တစ်ဝက်စိုက်ထူခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ okrerection များသည် ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်အထိမကြာပါ။ တဖန်ငါအာရုံကြောအပြစ်တင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ၂၀၀၅ နွေရာသီမှာစတင်တွေ့ခြင်း၊ GF ကို ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းစတင်ခဲ့သည်။ ငါအတန်ငယ်ခက်ခဲစွာနေနိုင်သကဲ့သို့လိင်သည်ကောင်းပေ၏၊ သို့သော်လွန်ခဲ့သော ၂-၅ နှစ်ကမပေါက်ကြားခဲ့ပါ။ ငါကအာရုံကြော / စိုးရိမ်စိတ်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်နေသေးတယ်။
ဒါကနှစ်ပေါင်းများစွာအပေါ်သွားလေ၏။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Swingers ပါတီတွေ၊ ကလပ်တွေကိုသွားမယ်၊ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူမတည်ရှိဖို့ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ ငါစိုက်ထူရဖို့, 2008 မိနစ်လိင်ဆက်ဆံဖို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရပ်တန့်ဖို့ရှိသည်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူရှုပ်လိမ့်မယ်ကြိမ်တွေအများကြီး။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၈-၂၀၁၁ မှနှစ်များတစ်လျှောက်လုံးအဆင်းလှသောအမျိုးသမီး ၄၀ နှင့်အတူရှိခဲ့ရပေမည်။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ကြီးကျယ်တာကိုမမှတ်မိဘူး။ စိုက်ထူငါ့မရှိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်အတိအကျဆိုတာကျွန်တော်မမှတ်မိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် MB ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနဲ့အဆက်မပြတ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်၊ ဘင်ဂိုကစား။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ MB ကိုအွန်လိုင်းစဖွင့်ချိန်ကစပြီးကျွန်တော့် ED ရဲ့အကြောင်းရင်းကမကောင်းဘူး။
အကြှနျုပျ၏စွဲ horrid ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤဖိုရမ်ရှိအသင်းဝင်များကဲ့သို့မကောင်းပါ။ တစ်နေ့လျှင် ၁ နာရီမှစနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင် ၈ နာရီမူးသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၄ မှ ၂၀၁၂ အထိဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် GF ရရှိသောအခါစနေနေ့ညတွင်လှပသောပါတီပွဲသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပြီး၊ အဆင်းလှသောမိန်းမများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမည်ဟုကျွန်ုပ်သိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါပါတီပွဲတက်ဖို့ငါ့ GF ကိုကောက်ဖို့ထွက်မသွားမချင်းငါနင့်နေတဲ့နေရာမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတင်နေတုန်းပဲ။ ဒါဟာစွဲခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဘိန်းဖြူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်အပျက်များနှင့်သာဆက်စပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြာခဏ MB ညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းရုပ်ပုံကမူးယစ်ဆေးဖြစ်ရင်ငါသေတာကြာပြီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြာခဏပြောခဲ့ဖူးတယ်
မင်းကို MB အကြောင်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းပုံစိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုဘယ်လိုအမြန်ပုံပြင်ပြောပြပါရစေ။ 2011 ခုနှစ်မှာငါချိုမြိန်မိန်းကလေးတစ် ဦး ချိန်းတွေ့ခဲ့သည်။ ဂတ်စ်စ်သို့သွားခဲ့သည်။ ငါအခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူဆက်ဆံရေးကနေလမ်းလွဲ။ ငါနှင့်အခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး ဟိုတယ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ငါတို့အခန်းထဲမှာသောက်နေရတယ်၊ ငါ GF ကိုမနက်ဖြန်နင်တွေ့မယ်လို့ပြောဖို့ငါခေါ်ခဲ့တယ်။ ငါနှင့်လိမ်နေသောမိန်းကလေး၏ဖုန်းဘေးတွင်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုကောင်တာပေါ်တင်လိုက်သည်။ ဖုန်းမြည်လာပြီးမိန်းကလေးကသူမရဲ့ဖုန်းလို့ထင်နေခဲ့တယ်။ 3some အတွက်လာမယ့်အခြားမိန်းကလေးကတော့ကားရပ်နားရာနေရာတွင်ရှိနေပြီးအခန်းနံပါတ်ကိုခေါ်သွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မိန်းကလေးကကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုအမှားဖြင့်အဖြေ ပေး၍“ ငါတို့အခန်း ၂၀၉ ထဲမှာရှိနေတယ်၊ သူမသည်အဖြစ်အပျက်ကိုသူချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်သည်။ ငါကဲ့သို့ပင်နောက်လာမည့် GF နှင့်စကားပြောဖြစ်ပျက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အသေးစိတ်မရှင်းပြပါ။ ဒါဟာအဓိပ္ပါယ်မဲ့ပါတယ် သို့သော်တစ်နာရီကျွန်ုပ်ကားထဲတွင်ထိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏ GF နှင့်စကားပြောပြီးနောက်အခြားမိန်းကလေးကသင်ပြန်လာမည်ဟုပြောပြီးကျွန်မတို့ဒီမှာသောက်နေကြသည်။ ငါ F-IT လို့ပြောတယ်၊ ငါဒီမှာရှိနေပြီ၊ ငါ့ gf ကငါနဲ့အတူကွဲသွားမယ်၊ ငါ့ကိုတက်ခွင့်ရပြီးပျော်ရ ဦး မယ်။ ငါအခုဘာတွေဆုံးရှုံးရမလဲ။
ဒါနဲ့တက်အဲဒီမှာသွားနှင့် 20 မိနစ်အတွင်းကျနော်တို့ကမှာသွားအားလုံးအဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်ကြသည်။
မိန်းကလေးများတစ်ခုမှာ, ငါ့ကိုလူရှုပ်အကြှနျုပျအပျေါသို့ဆင်းသွားပါ, FULL စိုက်ထူရန်စတင်! ငါကပဲအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်,7နှစ်များတွင်ကဲ့သို့အပြည့်အဝစိုက်ထူခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ အခုဆိုရင်ယခင်ရက်သတ္တပတ်ကအတိတ်7နှစ်ပေါင်းဖြစ်သကဲ့သို့တူညီခဲ့ porn အလေ့အထငါ့ကို MB, စိတျထဲတှငျစောင့်ရှောက်လော့။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း porn မှ MB ။ ငါလွယ်လွယ်ကူကူနှစ်ဦးစလုံးမိန်းကလေးတွေမရှိပြဿနာကိုထွင်းဖောက်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးထိပ်, အဘယ်သူမျှမပြဿနာ (အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အကျွန်ုပ်ကိုစီးလျှင်ငါလိင်စဉ်အတွင်းခက်ခဲရဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လူရှုပ်တဲ့အခါအချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ကိုယ့်ခဲယဉ်းနေပါမှာမဟုတ်ဘူး) ရက်နေ့တွင်ရတယ်။ ငါ porn ကြယ်ပွင့်နဲ့တူလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။2နာရီမှာသွား၏။ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ?
ကောင်းပြီ, ငါ့ gf နှင့်သူမထွက်တွေ့ရှိပြီးနောက်ကြောင့်တစ်နာရီသွားသမျှသောဒရာမာအပေါ်လိမ်လည်ခြင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲဒုက္ခကိုတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု created
တအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်အခြားအဘို့, ငါ၏စိတ်ကိုငါ porn သွေးဆောင် ED ခဲ့ကြောင်းကိုမေ့လျော့စေတော်မူ၏။ စဉ်တော့ FREAKING STRANGEST ။
ငါဟိုတယ်သူတို့အားစိုက်ထူထံမှလာခဲ့ပါဘူးရှိရာထိုညဉ့်စဉ်းစားတွေးခေါ်, ထားခဲ့တယ်။ ငါအွန်လိုင်း porn အကြောင်းမရှိ ED မှ MB အထိထွက်ရှာတွေ့မှငါ့ကိုဦးဆောင်ကြောင်းသုတေသနလုပ်ဖို့ beagn တဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာပဲ MB ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ဖို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ပျက်ကွက်။ ၈ ရက်သည် MB မရှိဘဲအရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ porn မှ MB အထိအရှည်ဆုံးမှာရက် ၃၀ ဖြစ်သည်။ အကြှနျုပျ၏စွဲကအရမ်းက 8 ရွေးချယ်စရာနှင့်ငါ့ကိုထားခဲ့တယ်အလွန်ဆိုးရွားခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအတွင်းလူနာအကူအညီရရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဖုန်းမှအထူးကုနှင့်အတူစကားပြော။ ကျွန်တော့်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးဖို့သူတို့မှာစက်ရုံရှိတယ်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်များအားလုံးကိုလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုခေါ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အာမခံကိုသေချာအောင်လုပ်ခြင်းအထိဂရုစိုက်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းပဲ။ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုလို့ထင်တာပေါ်မူတည်ပြီး ၇ ရက်၊ ၃၀ ရက်နေ့ မှစ၍ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အလုပ်မှပျောက်ကွယ်သွားရမည်။ ငါသူတို့ကိုငါပြောချင်တာကငါ့မှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရှိချင်သေးတယ်။ ငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခလုပ်ကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ အလုပ်မလုပ်ရင်နောက်နေ့မှာစက်ရုံကိုချက်ချင်းစစ်ဆေးလိမ့်မယ်။
ဇန်နဝါရီလ 1st, 2013 တွင်, ငါ porn မှ MB အထိဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးကတိကဝတ်ကို လုပ်. , swinger site ကိုရုပ်ပုံများ, etc သို့သော်လည်းငါသည် MB အထိကိုရပ်တန့်ဘဲနေ၏။ ကိုယ့်အပေါငျးတို့သ porn ပုံရိပ်တွေမှ MB အထိဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲ MB ဖို့တိုက်တွန်းရှိသည်မယ်လို့သိထားတယ်။ ဤအစွဲရိုက်နှက်မှာပဲငါ့အကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ရက်သတ္တပတ်၏ပထမစုံတွဲရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် MB သည်တစ်နေ့လျှင် ၈ ကြိမ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၂ ပတ်အကြာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာဓာတ်ငွေ့ MB ကုန်သွားပြီးကျွန်တော့်ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ကို MB အထိလှုံ့ဆော်ဖို့ဘာမှမရှိပေမယ့်ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုချင်နေဆဲပါ။ ဒါဟာတော်တော်လေးထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မမှာလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် MB ဟာကျွန်တော်မပျော်မရွှင်နိုင်ပေမယ့် MB ရဲ့ပျော်ရွင်မှုကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်မသိလို့ပါ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 8ပြီလ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုနှစ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊ မည်သည့်စှဲလမျးသူကဲ့သို့, ဒါမှမဟုတ်ဘဝမှာအခြားအရာအားလုံးကဲ့သို့အဘယ်အရာကိုမျှသေချာသည်။ ဒါပေမယ့်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းမှာအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ porn နဲ့ဘာမှညစ်ညမ်းမှုမရှိပါဘူး။
ကျွန်မအကြောင်းကို 20 ရက်အကြာမှာနံနက်သစ်သားရဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့အကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ပါတ်ရ။ ငါရလဒ်ကောင်းနှင့်အတူလိင်ခဲ့ကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့စိုက်ထူတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသူတို့ကသူတို့နေ့ရက်ကာလကို prn ငါ့ MB အထိကာလအတွင်းခဲ့ကြသည်ထို့နောက်ပိုကောင်း 60-70% ရှိပါတယ်။ ငါညမှာငါ့အိပ်ရာထဲမှာရေချိုးခန်းဆဲကို MB, ။ ပုံမှန်ကောင်လေးလိုပဲ။
80 နေ့ရက်ကာလ၌။ ပဲလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။4ကြိမ်သွား၏။ မိန်းကလေးတစ်ဦးခံနိုင်ရည်ငါ့လုပ်ရပ်မှာတအံ့တသြခဲ့ပါတယ်။ သူတော်ကောင်းခံစားရပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို။ ရှင်းလင်း။ Edit ကို: အဆိုပါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုငါသည်ငါ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်ယူသကဲ့သို့ငါများသောအားဖြင့်ညာဘက်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ကနေဆငျးရဲခံရခဲ့သည်။ ငါ့နှလုံးပြိုင်ကားခံခဲ့ရသော်လည်းဤအချိန်, ငါသည်ငါ့ပုံမှန်အတိုင်း ED ထံမှခံရပါဘူး။
အောင်မြင်ခဲ့ !! ဒါဟာအားလုံးစောင့်ဆိုင်းရကျိုးနပ်သည်! ... ဒါပေမယ့်မေးခွန်းများကို
ဒါကြောင့်ငါသေးငယ်တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်မှပြန်ဖြစ်၏။ ငါ PMO မပါဘဲ ၆၅ ရက်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံး ၂၅ ရက်သည် YBR မပါဘဲဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုအပြုသဘောပြန်စဉ်းစားရန်နှင့်ပုံမှန်လိင်ဘဝဘဝသို့ပြန်ရောက်ရန်ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။
Em 72 ကနေ့ ၇၂ မှာငါပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောပြီးငါ့ကို porn မှာကြည့်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါ M ကိုမလုပ်ခဲ့ပေမယ့်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိဘဲပင်သုတ်ရည်ကိုထုတ်ခဲ့တယ်။ ငါပင်ထိုနေ့နှစ်ရက်အကြာတွင်အတွေးများကို MO'd တောင်မှအပြည့်အဝစိုက်ထူနိုင်ဘူး! ဒါဟာကြောက်စရာကောင်းပြီးစိတ်ဓာတ်ကျပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရက်သတ္တပတ်တွေ၊ နောက်နေ့ကျတော့ငါအရင်လိုပဲနံနက်ခင်းမှာစိုက်ထူနေပြီ။ သူတို့ဟာနောက်ထပ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာအောင်ဆက်လက်နေခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်၏ပြissueနာကိုနားလည်သောမိန်းမနှင့်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသည့်နေ့ရောက်လာသည်။
ငါ Viagra ဆေးသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ယူတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်ကပြproblemနာဖြစ်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါဟာခဲ့ပေမယ့် Viagra အကြီးအကျယ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါသာသနာပြုစတိုင်မှာအရင်ကလိုလိင်ဆက်ဆံတာကိုအတော်ကြာကြာခံနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့သူ့ကိုထိပ်ပေါ်မှာကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါ့အဘို့အနည်းငယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသော်လည်းအချို့ DE သတိထားမိခဲ့ပေ။ သုတ်ရည်လွှတ်ရန်ခက်ခဲနေပုံရသည်။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော့်ငပဲကခဲယဉ်းနေလို့ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူမသည်ရှည်လျားသော session ကိုခံစား, ငါသူမအဘို့ငါအလုံအလောက်ခက်ခဲဖြစ်နိုင်မီသူမစောင့်ဆိုင်းအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကိုမြင်လျှင်။ အကောင်းဆုံးကတော့ဒီလှည့်စားမှုခံပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာသူမကငါ့ကိုပါးစပ်ပေးပြီးငါ DE ကိုလည်းရခဲ့တယ်။ သို့သော်ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၅ လကရှိခဲ့သည့် Viagra နှင့် ပို၍ ဝေးသည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်မေးခွန်းသည် DE သည်ဘယ်လောက်ကြာကြာခံနိုင်မည်နည်း။ အခုဆိုရင် Viagra ကိုကျွန်တော်လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလောက်ဘယ်လောက်ကြာကြာလိုအပ်မလဲ။ ငါအချိန်တစ်ခုချင်းစီကိုလျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းသုံးစွဲဖို့စတင်သွားနေပါတယ်။ နောက်ဆုံး၊ ငါဟာ ၉၀ ပြည့်နှစ်ကနေ ၇ ရက်ကွာနေတုန်းပဲ၊ ငါပြန်ဖြစ်သွားပွီဖြစ်ပေမယ့်မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်နဲ့အောင်မြင်စွာလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါလုံးဝ rewired မဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိပေမယ့်အခုငါဘာမျှော်လင့်သင့်သလဲ ငါ reboot လုပ်ပြီဆိုတာသေချာပြောနိုင်သည်အထိဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ Viagra ဘယ်လောက်ကြာမလဲ
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အလွန်ကြီးကျယ်လှသည်။ ငါ့အသည်းနည်းနည်းသက်သာတဲ့အခြေအနေကငါ့ကိုပြန်မထားဘူး ဒါပေမဲ့၊ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်၊ ညစ်ညမ်းတဲ့အစဉ်အလာမရှိတော့ဘူး၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါသုတ်သင်နိုင်တယ်၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ဦး နှောက်မှ dopamine နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ကြိုးစားအားထုတ်မှုယောက်ျားတွေတက်ထားပါ, အဲဒါဖြစ်နိုင်တယ်! ငါမကုသနိုင်ပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ယခုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာအလင်းကိုမြင်နေရတယ်။
အားလုံးကဒီမှာနှင့် yourbrainrebalanced.com မှကျေးဇူးတင်ပါသည်!
ဟုတ်ကဲ့အမျိုးအစား။ ၎င်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြissueနာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် PMO နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးယခု ED ရှိသည့်ကျန်းမာသောကောင်ဖြစ်ပါက PMO သည်တရားခံဖြစ်ရန်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရက်ပေါင်း ၆၀ လောက်အကြာမှာ (ပြီးတော့ငါကအရမ်းကိုအသုံးဝင်သူပါ။ ) ကျွန်တော့်ဇနီးဘေးနားမှာတင်မယ့်အစားအရူးစိုက်ထုတ်မှုတွေရခဲ့တယ်၊ အပြည့်အဝ sensitivity ကိုပြန်လည်။ libido သိသိသာသာမြင့်တက်လာ, အမှန်တကယ်အချိန်များတွင်အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ကြိုဆိုအဆင်မပြေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဒါကိုရမယ်၊ ကျွန်မအသက် ၄၀ ရောက်ပြီ။
124 days ago ငါစုစုပေါင်းပျက်ကွက်တူသော feeling, ငါ့ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ငါခြောက်နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, လှပတဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ဖြစ်ကြောင်းကို, လိင်ကောင်းမွန်သောဤခံစားခဲ့ရဘယ်တော့မှသိရသည်။ သူချင်း nofappers သွားသိမ်းဆည်းထားပါ, သင့်ခရီးရဲ့အဆုံးမှာအကျိုးကိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပြီး, အားလုံးအများစု; လက်လှမ်းမမီအတွင်း။
မင်းရဲ့ပို့စ်တွေကိုငါကြာမြင့်စွာဖတ်ဖူးတယ်။ မင်းကိုအကြံပေးချင်တယ်၊ ငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ငါမှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ်။
ရပ်တန့်ခြင်းငါအလုံအလောက်အလေးပေးလို့မရပါဘူး။ သင်၏ရေးသားချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်သင်သည်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများကိုကျော်လွန်နေသည်ဟုထင်ရပြီးလိင်သည်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းအကြောင်းကိုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သဘာ ၀ ကျကျဖြစ်သင့်သည့်စိုက်ထူခြင်းသို့မရောက်နိူင်ပါ။ မင်းအဆင်ပြေဖို့လိုတယ်။ တည်ငြိမ်တဲ့ gf တစ်ချိန်ကတစ်ချိန်ကမင်းရဲ့ groove ကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ မင်းရဲ့ဖိစီးမှုတွေကိုဖြုန်းတီးနေသမျှကာလပတ်လုံးပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်။ တစ်နေ့မှာအားလုံးအလုပ်လုပ်ကြပြီးမင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်ရနိုင်မယ်။ မင်းဘဝကိုသွားပြီးအရာရာတိုင်းကိုလိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတွေးတော့ဘူး။ ဒီ helps.ps မျှော်လင့်ပါတယ်။ PIED ကတကယ့်စစ်စစ်ပါ။ ၁၄ နှစ်အရွယ် မှစ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်တော် PMOing လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါမှားသွားပြီ။ သင်ရုံဖြစ်ဖို့ပဲ။ အချိန်လာသောအခါအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အပျိုစင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရည်းစား, တယ်။ အသက်အရွယ် 23 ။
by towonderland63 ရက်ပတ်လုံး
အခုအချိန်မှာစာရေးရတာသိပ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ ဦး နှောက်နဲ့ဒီ reddit အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာထာဝရတည်ရှိပြီးနောက်လွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ် (နောက်ဆုံး) အလွန်လှပသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ရင်းနှီးသောဆုံတွေ့ခဲ့သည်။ ငါကအားလုံးကိုတက်ရနိုင်ဘူးတော်တော်များများထွက် freaked ။ ထိုမိန်းကလေးနှင့်ဆက်ဆံရေးသည်အကြောင်းပြချက်အတော်များများကြောင့်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။
ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်အများစုငါ၏အတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / ညစ်ညမ်းအလေ့အထရှိခဲ့သည်နေသေးတယ်။ ငါပစ္စည်းပစ္စယ googled ဒီမှာနှင့် yourbrainonporn.com ပေါ်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါ YBOP ငါ့ကို nofap / noporn ပါလုပ်ထင်ပါတယ်။
နှစ်လကြာပြီးတဲ့နောက်ငါရည်းစားတစ်ယောက်ရဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒီတနင်္ဂနွေမှာငါတို့ဟာအောင်မြင်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့တယ်။ ငါကအပြည့်အဝထရထိုးဖောက်နှင့်လာနိုင်ခဲ့သည်။
အစဉ်အမြဲငါ porn နှင့်ပြုမိသည်နှင့်အနာဂတ်ကာလအတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ပါလိမ့်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးပါပဲ။ ငါဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာမယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်လို့ဒါငါငါ့နှုတ်ဆက်ခြင်းပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် nofap ။
၆၀ ရက်ကြာ Mark - ED, DE နှင့် More
Howdy Reddit ။ ငါအရင်ကဒီဆောင်းပါးကိုတစ်ခါမှမတင်ဖူးဘူး (တကယ်လို့မင်းငါ့မှတ်ချက်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ဒါကတကယ်တော့ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းအက္ခရာပါ) ဒါပေမယ့်ငါမင်းရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုဒီနေ့ ၆၀ ရက်ကလက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်၊ စကားလုံးအနည်းငယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မလိမ့်မည်။ အတူတူထွက်ရှာကြည့်ရအောင်
ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်သက်သက်သာဤလမ်းကြောင်းကိုဆင်းစတင်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ငါ့ကိုနိဒါန်းကြပါစို့။ ငါမကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တစ်ခါလေးကြိမ်လေ့ကျင့်ခြင်းမခံခဲ့ရသော်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလေ့ရှိသည့်ဤအလေ့အကျင့်သည်တစ်နေ့တာသည်တင်းကျပ်စွာချုပ်ကိုင်ထားခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ချောဆီအရည်ပျော်မှုမရှိခြင်းကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအပေါ်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ လိင်ပြproblemနာဖြစ်လာခဲ့သည်; ငါ့ကောင်မလေးစိတ်ထဲမှာစွဲမက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆွဲဆောင်ပြီးအိတ်ထဲမှာနတ်ဆိုးစွဲနေပေမယ့်လည်းငါ့အောက်ထပ်ရောစပ်မှုတွေကိုမကြာခဏစိတ်ပျက်မိတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့စိုက်ထူမှုတွေကပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်၊ ငါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာလိင်ဆက်ဆံပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ED နှင့် DE နှစ်ဆ whammy ။ လိင်နောက်ဆုံးမှာငွီးငှေ့ဖှယျနှင့်ငြီးငွေ့စရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ရက်ပေါင်းခြောက်ဆယ်အကြာတွင်အစာရှောင်ရှေ့သို့။ ငါဒီအချိန်မှာလုံးဝ abstinent ကြပြီမဟုတ် ... သို့မဟုတ်မှာအားလုံး, တကယ်ပဲ။ မကြာခဏလိင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံ။ ယခုမှသာကောင်းပြီ။ အလွန်ကောင်းသည်။ ငါခံစားခဲ့ရပြီးငါနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကောင်းသည့်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြာခဲ့သည်။ DE သည်အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီး ED သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်၎င်းအချက်သည်ယခုအချိန်တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissueနာပိုများနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်ကျရှုံးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်၏ယူဆချက်များနှင့်အလွန်အကျွံဖမ်းမိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်၏မျှော်လင့်ချက်များကိုမလျှော့ချချင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု။ ငါမသိ၊ ငါစိတ်ရောဂါဆရာဝန်မဟုတ်ဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကငါထင်ထားတာထက်ပိုရှည်နေတယ်။ ရက် ၉၀ အမှတ်အသားကိုနှိပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် အဲဒီနောက် ... ကောင်းပြီ, ငါရိုးသားဖို့, တစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ မကြာခဏနည်းနည်းညင်ညင်သာသာနှင့်ချောဆီအရည်များများနှင့်အတူ။
ဒါဟာငါ့လိင်တံပါ။ ငါအခြားညဥ့်ပါတီနှင့်သောက်ထွက်သွားနှင့်အမျိုးသမီးမျိုးစိတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အောင်မြင်စွာ woooo ။ ငါတို့အဝတ်တွေကိုဆုတ်ဖြဲဖို့ငါ့အခန်းထဲပြန်လာတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ get-go ကနေ ED ကိုအရက်နဲ့ရောစပ်ပြီးညကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့ ED ကိုကျွန်တော်အရမ်းကြောက်တယ်။ သို့သော်ဤအချိန်သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာသိပြီးလုပ်လိုက်တယ်။ ငါအားလုံး "yeah!" လိုပဲ သူမအားလုံး "yeah!" ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်၏ကောင်တာသည် ၁၂ ရက်သာရှိသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်း ၂၈ ရက်အကြာ၌ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်၎င်းအောင်မြင်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏ယခင်အစွန်းမှကျန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဟုမှတ်ယူခဲ့သည်။
ကိုယ့် 110 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ် reboot ပြု. , နေ့၌ငါ၏အ ed လုံးဝပျောက်ကုန်ပြီတို့နှင့်ကြီးသောလိင်ခဲ့ရတယ် 95 ။ ဒါပေမယ့် .. ကံမကောင်းဈပြန်ရောက်သွားတယ်နှင့်6ပတ် porn အပေါ် binged .. (pmo (2 တခါတရံ3ကြိမ်တစ်ပါတ်) နှင့်ဈစပ်စုခဲ့ဈယခု2ရက်သတ္တပတ်အဘို့အကြှနျုပျ၏ဒုတိယ reboot အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ဈနောက်တဖန်ကြီးတွေ flatline ဖြစ်၏။
ဒါငါ့အမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ပုံ IS / ဒုတိယ reboot ကဲ့သို့ဖြစ်၏? အိုင်တီ (ED FROM မှ?) နေသမျှကာလပတ်လုံးမှာ FIRST reboot ပျောက်ကင်းအောင်ကုသရယူ DID
ဤသည်အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး (share ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင် TMI အရာ) ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာသွားသည် ... ကျွန်တော့်ဇနီးခြောက်လကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်တယ်, ဒါလိင်နည်းနည်းပို့ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ငါနေဆဲငါ့အညစ်ညမ်းစွဲ၏အမူအရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအတွက်နက်ရှိုင်းသောအခါသုံးပတ်အကြာ, ငါသည်ဒုက္ခကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအဆင်ပြေခဲ့တဲ့အနေအထားတွေ့ရှိရန်လိုအပ်သောကျွမ်းဘားကာလအတွင်းကတက်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပေသည်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်မျှ porn (နှင့်မျှ fapping) ၏တစ်ပါတ်ထက်အနည်းငယ်ပိုပြီးခက်နေဖို့ရန်မပြဿနာကို၎င်း, ရငျးနှီး (နှင့်အော်ဂဇင်) ဖြစ်ခဲ့သည်နှစ်ဦးစလုံးသူတို့တစ်တွေရှည်ရှည်ရှည်လျားကာလ၌ဖြစ်ရပြီထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲဆယ်ရက် Going လွယ်ကူသောခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးညဥ့်အဲဒါကိုလုံးဝတန်ဖိုးရှိလုပ်မထားပါဘူး။
PIV လိင်! နေ့ 31
နံနက် ၅း၀၀ နာရီမှာအိမ်ကိုချန်ပီယံတစ်ယောက်လိုခံစားနေရတာပဲ။ ကျွန်ုပ်၏စာအရေးအသားသည်အနည်းငယ်ကွဲလွဲနေသော်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူလိုက်နာပါ။
ED မကောင်းတဲ့ ED ရောဂါပျောက်ကင်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေအကြာမှာငါဒီညပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ဒါကလူအများစုအတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာလို့ထင်ရသော်လည်းငါ့အတွက်တော့ဒါဟာငါကျော်လွန်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုပါ။ ဒီနေ့ ၃၁ ရက်မှာလုပ်ခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့ငါ PMO ကိုအခု ၃ နှစ်လောက်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာငါနောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာ im လိုခံစားရတယ် ကျွန်တော့်ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သေးတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အောင်မြင်စွာ ၇၅% ထိအောင်ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူမသည်သူမ၏ pussy အတွက် cum ရန် sooooooo ကောင်းသောခံစားရတယ်။ ငါ့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ခြေထောက်များ၊ လက်ဆွဲစက်များ၊ ငါထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ငါ chump ကဲ့သို့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းစိုက်ထူဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်! porn တကယ်ငါ့ကိုတက်လွဲချော်သွားတာ။ ငါ့ဘဝမှာအခန်းအသစ်တစ်ခုစနေပြီလို့ငါခံစားရတယ်။ ငါလူတိုင်းငြီးငွေ့တယ် မနက်ဖြန်ငါ့ခရီးအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုငါပြောပြမယ်။
နေ့ 26 ငါလိင်ရှိသည်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်, ED ကိုအလွန်လျော့!
(၃၅၊ M) ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်၊ ပထမဆုံးအကြိမ်အတူတူငါ ED ပြင်းထန်သော 35% တုံ့ပြန်မှုကိုခံခဲ့ရသည်။ ငါပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့ကြောင်းနောက်ဆုံးဝန်ခံကတည်းကငါအချို့အကူအညီတောင်းန်းကျင် googled ။ Reddit မှာတရားဝင်အရင်းအမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကြားရတဲ့အခါငါက "Reddit? ရယ်စရာအကြံဥာဏ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူအရပျ?
ကျွန်ုပ်ဤနေရာနှင့်သင်၏အကူအညီကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည့်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ ငါ PMO အခမဲ့ယခု ၂၇ ရက်နေပြီး၊ မနေ့ညကကျွန်ုပ်၏အမျိုးသမီးအသစ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% ကိုပြန်မရောက်သေးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် ၈၀% စိုက်ထူခြင်း၌လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကအလွန်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်။
ဘေးထွက်မှတ်စု: ငါ fap ခေတ်ရှိခဲ့ဖူးထက်လမ်းပိုစွမ်းအင်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လကစဉ်း စား၍ မရနိုင်သောအလုပ်များသောနေ့များတွင်အလုပ်မလုပ်မီအားကစားရုံသို့သွားရန်စောစောထသည်။ ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်သည်ဤလုပ်ငန်းကို pmo စီးပွားရေးမလုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ရက်ပေါင်း (၂၀) ​​အတွင်းစစ်ဆေးမှု၊ ED မှေးမှိန်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပြီးဖြစ်သည်
ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့ညက OKcupid တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်နေသည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် PMO'ed ၂ ပတ်ကျော်အတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သူမကားထဲတွင်ထွက်လာစဉ်ကျွန်ုပ်၏အံ့အားသင့်စရာစိတ်ကူးကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အိပ်ရာခင်း - လိင်မဟုတ်ပေမယ့်ငါစိုက်ထူခြင်းရရှိရန်ပြproblemsနာမရှိ - ၁၀၀% သေချာပေါက်လုံလောက်သော်လည်းသေချာသည်။ ကျနော်တို့ (ဒီအပတ်သူမကိုတွေ့မြင်ဖို့မျှော်လင့်) လိင်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်တကယ့်ဘဝလှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ရှေ့မှောက်၌ပြန်လည်အလုပ်လုပ်တဲ့လိင်တံရှိခြင်းဆက်ဆက်အခမ်းအနားများအတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါအရမ်းရှက်ပြီးဒီဟာကိုရိုက်ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းတဲ့အလေ့အထဟာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေတဲ့ပုံပဲ။ နှစ်များတစ်လျှောက်မနက်ခင်း၌သွားတိုက်ခြင်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ PMOing သည်သကြားလုံးတစ်ဖဲ့ကိုစားခြင်းနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှု မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်သည်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ပျင်းစရာကောင်းခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသည့်အချိန်တွင်သို့မဟုတ်သတ်ရန်ဆယ်မိနစ်သာအချိန်ပေးခဲ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများပြန်ပေါ်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝခံစားလာရပြီးကျွန်ုပ်သည်လျှို့ဝှက်ခြင်းကြောင့်ဤအရှက်တကွဲအကျိုးအကြောင်းကိုမခံစားရတော့ပါ။ ငါဘားမှာတော်တော်လေးမင်းသမီးများကိုတွေ့သောအခါ, ငါသည်ငါ့အသက်တာ၏နာရီပေါင်းများစွာဖြုန်းဘယ်လောက်မြင်ကြလျှင်, သူတို့ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်စဉ်းစားရန်မလိုအပ်တော့ဘူး, မျက်လုံးများကိုကျော် glaze နှင့်အတူကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌အမျိုးသမီးများ၏ရုပ်ရှင်မှတစ်ကိုယ်ရည် ငါတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာတောင်မသိဘူး၊
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၂ ​​နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ငယ်ရွယ်သေးသော်လည်း၊ ညစ်ညမ်းသော၊ အဆိပ်အတောက်ကင်းသော၊ ရှုံးနိမ့်သော၊ ဘဝကိုစုပ်ယူသည့်အတွေးအခေါ်၌မပါ ၀ င်ပါကကျွန်ုပ်၏အသက်တာကိုဤမျှမတိုင်မီကျွန်ုပ်မည်မျှ ပို၍ ချစ်မြတ်နိုးမည်ကိုစိတ်ကူး။ မရပါ။ ဒါနှင့်အတူကြွလာ။ သင်အမှန်တကယ်မှာအရှက်တကွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ သင်ကလူတိုင်းနှင့်ဝေးဝေးပုန်းရှောင်နေစဉ်၊ သင်၏လက်သီးကိုဆုပ်ကိုင်ထားခြင်း၊ သူမအပေါ်စိတ်မသက်မသာနေစဉ်သင့်အိမ်အပြင်ဘက်ရှိလူများသည်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံစားနေရကြောင်းသင်သိသောကြောင့်၊ နောက်မှ
ဒါဟာအမှန်ပါပဲ - သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တယ် မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းတို့အတွက်အခိုက်အတန့်မှလွတ်မြောက်ပြီးပျော်မွေ့ခြင်း မှလွဲ၍ ဤအလေ့အထသည်သင့်အတွက်အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာမရှိပါ။ 2-D အမျိုးသမီးများ၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုရန်နာရီနှင့်နာရီကိုသင်မသုံးရန်လိုအပ်သည့်အသိပညာဖြင့်လမ်းလျှောက်နိုင်မည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒါကပရော်ဖက်ရှင်နယ်နပန်းသမားလိုပါပဲ။ စစ်မှန်တဲ့ဘဝဟာအဲဒီလိုမျိုးပဲလို့ဘယ်သူမှမထင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်လူတွေကဘာကြောင့်ယောက်ျားတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာလဲလို့ဘာလို့ထင်ကြတာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရမည့်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြproblemနာကိုမိမိဘာသာဖြေရှင်းရန်လိုသည့်ပထမမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ အခြားမည်သည့်လူ ဦး ရေကမျှဤညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်နေဆဲလည်းဖြစ်သည်။ ယခင်မျိုးဆက်သည်ဤညစ်ညမ်းမှုပမာဏနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိသောကြောင့်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ - အတိတ်၏အဆိုးရွားဆုံးသောဖောက်ဖျက်မှုများပင်ပိတ်ထားပြီးနောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသောစာအုပ်ဆိုင်နှင့်ပြသမှုကိုပြသခဲ့သည်။
ဒါကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်နဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်ရှည်လများဆက်ဆံနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားတာ၊ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွေကျင်းပတာ၊ ခရီးထွက်တာတွေ၊ လူအများရှေ့မှာလက်ကိုဆုပ်ကိုင်တာတွေ၊ ငါအမြဲတောင့်တခဲ့ပေမယ့်ငါကတောတောထဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားဝင်စဉ်းစားလို့မရခဲ့ဘူး။ ငါစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျသောအခါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကုန်ဆုံးသွားသောအခါငါသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းများတွင်ပါ ၀ င်သောခွဲစိတ်ကုသသောအမျိုးသမီးများအတွက်အခကြေးငွေမရရှိပါကသူတို့ဘယ်တော့မျှလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ဒါဟာအရမ်းကိုရယ်စရာကောင်းတယ်။ လူကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါဒါကိုငါ့ဘဝမှာဘယ်လိုဖြုန်းတီးခဲ့တာလဲ။ သူတို့ရဲ့ဘဝလေးနှစ်တာကို WoW ကစားခဲ့ဖူးသူတွေကိုငါရယ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တာကပိုဆိုးတယ်။ ငါစကားပြောစရာနေရာမရှိဘူး။
ဒီနေရာမှာနှစ်သစ်တစ်ခု၊ ငါ့ကိုအသစ်တစ်ခုပါ။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကြောင့်အာရုံပျံ့လွင့်ပြီးနောက်လာမည့်တပ်မက်မှုများကိုကျွန်တော်မဖြုန်းတီးပါ။
အချိန်ကြာမြင့်စွာပဲဒီကအဟောင်း, သင်ချောင်ခိုင်မာသောနှင့်အရွယ်အစားရရှိရန်ဘာဖြစ်ခဲ့သည်နေသေးတယ်။ ထိုအခါမူကားငါ PMO ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကအားလုံးကိုခက်ခဲစိုက်ထူကျောက်, ပြန် လာ. ငါမှီခိုပါဝါအဖြစ်ကောင်းစွာကျောလာသေး၏။ ကျွန်မဝမ်းနည်းစွာဒီတော့ကိုယ်ဖမ်းမိခြင်းနှင့်မကြာခဏကျနော်တောင်မှအပြည့်အဝခက်ခဲခဲ့ပါတယ်မတိုင်မီချွတ်တယ်ရမဟုတ်ဘူးအမြန်ချွတ်ရဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်။ မဟုတ်အတိအကျသငျသညျအကောင်းလိင်လိုလျှင်ပြုပါရန်သင်၏လိင်တံလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကောင်းတစ်ဦးအရာ။ ဒါဟာပိုကောင်းငါသည်ငါ့ဇနီးနှင့်အတူဖြစ်ကြောင်းကိုအခါတိုင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငါနေဆဲအနည်းငယ်အချိန်မတန်ရှိပေမယ့်အဖြစ်ကောင်းစွာပိုကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤလုပ်နေတာငါအဘယ်ကြောင့်မဖြစ်ပေမယ့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါသည်။
ငါကအရမ်းအလုပ်ရှုပ်နေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းပါပဲတစ်နေ့တာအချိန်ကာလအတွင်းကတည်းကငါ့အ reboot ၏နေ့တစျခုကတည်းကငါအထူးသဖြင့်ညဥ့်အခါငါ့အနောက်ဆုံးအစစ်အမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံထံမှထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးများနှင့်အမှတ်တရများရှိတယ် !! ငါပိုကောင်းကထိန်းချုပ်နိုင်သည်နှင့်သူတို့အလွန်အားကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြပြီးငါ့ reboot သို့ 19 ရက်ပေါင်းခဲ့ငါ, ငါ့ပထမဦးဆုံးလက်ထပ်အိပ်မက်ဖြစ်ပျက်တဲ့ flatline နှင့်နောက်ဆုံးညဥ့်ခဲ့ haven't တဲ့အခါမှာအခြားသောဘုရားမရှိဖြစ်ကြောင်းရက်ပေါင်းရှိပါတယ် !! တဦးတည်းလက်ပေါ်ပဲနမ်းတဲ့မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အိပ်မက် (ကညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲမတိုင်မီဖြစ်ပျက်ငါ့ကို ejaculate ရန်အဘို့အတကယ့်လိင်အဖော်နှင့်အတူကအစဉ်အမြဲယူမယ်လို့ဆဲပါကြောင်းအရာတစ်ခုခု) နဲ့တစ်ခုစိုက်ထူရနိုင်သည်ကိုကြည့်ဖို့ကောင်းလှ၏ ငါသေးတစ် flatline ခဲ့ရပြီး flatlines ငါကူညီ can't တိုးတက်မှု၏စစ်မှန်သောနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်မှတ်ယူကြသည် haven't ကတည်းကငါ့အလိင်တံတောင်ပိုကြီးပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ကြည့်, ငါ့အသက်ကိုပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖြစ်ပါသည်, ပိုကောင်းခံစားရပေမယ့်ကိုယ်ခံစားကြဘူး ပိုကောင်းလုပ်နေနိုင် !!!
သင့် ဦး နှောက်ထဲမှာရှိတယ်
ငါအခုထိရှိခဲ့သောအစောပိုင်းအောင်မြင်မှုဇာတ်ကြောင်းနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အချို့ကိုမျှဝေချင်သည်။ ပထမ ဦး စွာအခြေအနေအနည်းငယ်သာ ... ကျွန်ုပ်၏လတ်တလောလိင်ဆက်ဆံမှုများအနက် (၂) ခုအနက်မှ (၂) တွင် ED အမျိုးအစားအချို့ပါဝင်သည်။ အများစုသည်ကွန်ဒုံးနှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်အပိုဆုကိုမထိန်းသိမ်းဘဲထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်အာရုံကြောများသို့မဟုတ်စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူမှားယွင်းနေခြင်းကြောင့်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ထိုဆက်ဆံရေးများမှကြာမြင့်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ယောက်တည်းခံစားခဲ့ရပြီး PMOing ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်မိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကျွန်ုပ်ကိုရှေ့သို့အမြန်ပို့လိုက်ပါ ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွေ့အကြုံမကောင်းခဲ့ဘူး၊ အခုတော့ငါ NoFap ကို ၂၂ ရက်ကစပြီးလိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၊ ငါအရင်ကကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ပြsameနာတစ်ခုတည်းမှာပဲငါကွန်ဒုံးတင်တော့မယ့်အချိန်မှာငါစိုက်ထူမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းရှက်, အာရုံကြော, ကြောက်ခဲ့ပါတယ် ... အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု။ ကံကောင်းတာကသူမဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ၊ ဘာကြောင့်ငါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုငါစရှာဖွေခဲ့တယ်။
ငါ၏အ PMOing ဤပြproblemနာကိုတိုက်ရိုက်အကြောင်းမရှိခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်လာသောအခါဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပဲ။ ကျွန်မရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာဏာကိုပြန်လည်ရယူပြီးကျွန်မမယုံနိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်ခံရသူတစ် ဦး နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမည်ကိုလေ့လာချင်ခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့မနေ့ညကထပ်ပြီးလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါတို့သည်ထိုသို့ပြု! မသာ ... ငါကငါဖူးသောအကောင်းဆုံးတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်တော်တော်လေးသေချာပါတယ်။ ငါပြောဖို့ကြိုးစားနေတာကဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ကုသမှုစတင်ရန်သင်၏စိတ်နှင့် ဦး နှောက်ကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မပူပါစေနှင့်။ တစ်နေ့ချင်းတွင်တစ်ရက်ယူပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့သင်ဟာတစ်စုံတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အရာအားလုံးကိုအကျိုးရှိစေမယ့်အရာတစ်ခုခုရလိမ့်မယ်။
အိုးနဲ့ FYI …ဒါကငါ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပေမယ့်ငါဘယ်လိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါနေမကောင်းသေးဘူး။ ၁၀၀% တော့မရောက်သေးဘူး။ ငါဒီစာရေးနေတုန်း PMO ကိုတမ်းတနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကထိုအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ PMO ဘယ်တော့မှကျေနပ်အောင်မလုပ်နိုင်သည့်နည်းဖြင့်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၏ရင်းနှီးမှုနှင့်အမှန်ဖြစ်သည်။ ငါအရှုံးမပေးနဲ့ငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကငါ့ဘဝကိုပျက်စီးစေမှာမဟုတ်ဘူး။